इतिहासमा उदयपुरे साहित्य | मझेरी डट कम
पूर्वाञ्चलका सोह्र जिल्लामध्ये भित्री मधेसमा पर्ने एक जिल्ला हो- उदयपुर । प्राकृतिक दृष्टिले धनी भए पनि पूर्वाधार विकासको कमीले पछ्यौटे जिल्लाकै रूपमा परिचित छ । समुद्री सतहभन्दा २२४५ मिटरको उचाइमा अवस्थित यसको क्षेत्रफल २०६३ वर्ग किलोमिटर छ । यसका पूर्वमा सुनसरी र धनकुटा, पश्चिममा सिन्धुली र केही मात्रामा धनुषा, उत्तरमा भोजपुर, खोटाङ र ओखलढुङ्गा, दक्षिणमा सिराहा र सप्तरी जिल्लाहरू सीमानाका रूपमा रहेका छन् । नामाकरणका सन्दर्भमा नेपालटार र उदयपुरगढी दुबै ठाउँमा दरबार भएका उदयचन्द्र राजाले शासन गरेकोले, बेलकातरीमा उदयदेव राजाले राज्य गरेका हुनाले, उदयचन्द्र भन्ने प्रतापी राजाले राज्य गरेका हुनाले, मुसलमानी आक्रमणबाट बच्न उदयदेव नाम गरेका राजाले यस ठाउँमा आई राज्य गरेकाले यस जिल्लाको नाम उदयपुर रहन गयो भन्ने थरिथरीका मतहरू देखिन्छन् । मानेडाँडा, छताङ्ग, रुञ्चे, चित्रेथाम जस्ता झरना, पातले छाँगो, उदयपुर गढी, चौदण्डीगढी, रौतापोखरी, राजदह, गिद्धगया, बेलका दरबार भग्नावशेष, ककनी, त्रिवेणीधाम, पञ्चावती माई, बसाहाथान, खाट मन्दिरजस्ता पर्यटकीय स्थलहरू रहेको यो जिल्ला प्राकृतिक सौन्दर्यका लागि धनी छ । लेखानी, माझखर्क, रौतापोखरीजस्ता स्थान रहेका अग्ला ठाउँ पहाडी भू-भाग, नेपालटार, मुर्कुची, मैनाटारजस्ता उपत्यका र बाहुनीटार, भुट्टार, हर्देनीजस्ता बेँसी एवं खोँचहरू रहेकालाई बेँसी र टार भनी नामाकरण गर्न सकिन्छ । दक्षिणी भागमा चुरेपहाड छ । मुख्य गरी त्रियुगा र तावा खोलाले सीमाना छुट्याउन खोजेको पाइन्छ । यी नदी सीमावर्ती क्षेत्रका मुख्य नदीमा समेत गनिन्छन् । यस जिल्लामा कटारी, गाईघाट, बेल्टार, तपेश्वरीजस्ता धेरै हदमा समथर जमिन भएको तराई भू-भाग समेत पर्छ । यो जिल्ला चुनढुङको लागि प्रख्यात छ । त्यसैले जलजलेमा २०४४ सालमा उदयपुर सिमेण्ट कारखाना स्थापना भई हालसम्म सञ्चालित छ । यहाँ फलाम, अभ्रख, शिशाखनी, मयुङखुको बलौटेमा सुन र चाँदी खानी, म्याग्नेसाइट आदि को खानी रहेको पाइन्छ । प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार क्रमशः ५६.६७, १२.७६, ११.६१, ८.८२, ५.७१, १.८४, ०.७७, ०.६५ र १.१७ प्रतिशत जनताले उदयपुरमा नेपाली, राई, मगर, थारू, तामाङ्ग, मैथिली, नेवारी, दनुवार र अन्य गरी विविध भाषा बोल्दछन् । यस जिल्लामा वि.सं. १९७३ सालमा विद्यालय खुलेको देखिन्छ तर २०१८ सालमा पञ्चावती मावि, उदयपुरगढीले माध्यमिक तहको स्वीकृति लिएको पाइन्छ ।
साहित्यतर्फ भने उदयपुरे सर्जकहरूको क्रियाशीलतालाई नियाल्दा साहित्यिक विकासको यात्रालाई निम्न लिखित तीन चरणमा विभक्त गर्न सकिन्छ ।
(क) विजारोपणकाल (प्रारम्भदेखि ०१५ सालसम्म)- यसकालमा साहित्य कथ्यमा आधारित र कथ्यमा नै सार्वजनिक भएको अवस्था हो । लेखनमा आएमा पनि त्यो व्यक्तिविशेषमा आधारित थियो । यसकालका प्रतिनिधि सर्जकमा पुराना कवि लोकनाथ पोखरेल (१९३३-१९९४) र जनकवि गम्भीरवहादुर थापा (१९७१-०६५) हुन् ।
(ख) विकासोन्मुखकाल (वि.सं. ०१६ देखि ०३७ सम्म)- यसकालमा ‘लोकमञ्जरी’ कविताकृति प्रकाशन भएको पाइन्छ । नवपालुवा (०२२) साहित्यिक पत्रिकाको प्रकाशन सुरु, उदय पुस्तकालय (०२२/२३), जनजागृति पुस्तकालय (०३२), अम्बिका पुस्तकालय (०३८) लगायतका पुस्तकालयको स्थापना, गोवद्र्धन तामाङ्ग (१९९४) को ‘चिनारी’ (०२६, कविता सङ्ग्रह) र शान्तिकुमारी राई (०१३) को ‘दश कविता’ (०३४, कविता सङ्ग्रह) प्रकाशन, राममणि पोखरेल लगायतका सर्जकहरूका फुटकर रचनाहरू प्रकाशन सुरु भएको भेटिन्छ । यस चरणमा उदयपुरे साहित्य कथ्यस्तरबाट लेख्यमा प्रवेश गरेको पाइन्छ ।
(ग) विकासशीलकाल (वि.सं. ०३८ देखि हालसम्म)- यस कालको सुरुवात ‘चित्रण’ साप्ताहिक समाचारमूलक पत्रिका प्रकाशन (०३८) बाट भएको हो । त्यसपछि विषयगत विविधता पक्रिएर शान्तिकुमारी राई (०१३) को कविता सङ्ग्रह ‘संघर्षशील जीवन’ (०४१) प्रकाशन हुन्छ । उनले चाम्लिङ भाषासाहित्यमा समेत कृति प्रकाशन गरेकी छिन् । यस कालमै भाष्कर चौधरीको सम्पादनमा ‘त्रियुगाके सनेस’ (०६३) नामक थारू भाषाको त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका समेत प्रकाशन सुरु भएको पाइन्छ । यसकालमा थारू भाषाका फुटकर रचनाहरू प्रकाशन गर्ने धेरै सर्जकहरू जन्मिएका छन् । दर्जनौँ कृतिहरू प्रकाशन भइसकेका र भइरहेका छन् । विशेषतः गजल विधामा नयाँ पुस्ता होमिएको पाइन्छ । हरेक विधामा कलम चलाउने सर्जक जन्मिसकेका छन् । लेखनशैली, भाषा संयोजन, विषयगत विविधता आदिका दृष्टिले यस चरणका प्रतिनिधि स्रष्टाहरूमा राममणि पोखरेल, मातृका पोखरेल, पुन्य कार्की, कृष्ण शाह ‘यात्री’, शारदाप्रसाद भट्टराई, कपिल ठकुरी, टीकाप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद दाहाल, विश्वराज ढुङ्गाना, कुमार खड्का, टंकबहादुर आलेमगर, झमक कार्की, माधव पोखरेल ‘निरासी’, गिरीलाल परियार, विरशबाबु शाही, दीपक चिन्तक, जोतारे धाइवा, नन्दलाल आचार्य, इन्द्र थापा ‘मिलन’, पार्वती राउत, मणि कोइमी, राजेश खतिवडा, सुरेश परियार ‘सुमन’ आदि पर्न आउँछन् ।
त्यसै गरी प्रदीप हाइट, विन्दास आरके, गणेशकुमार दनुवार, मीरा शाकोर, प्रकाश ‘पुष्पक’ राई, हरिकुमारी राई ‘अभागी’, सुवास आम्बोटेली, जीवन चाम्लिङ राई, सुरेश परियार, जीवन खतिवडा, देवेन्द्र पोखरेल, घमानसिंह मगर, शाकुराजस्ता उदयपुरे सर्जकहरू साहित्यमा समर्पण देखाइरहेका छन्, इतिहास खडा गरिरहेका छन् । रामकुमार बस्नेत, भागवत राउत, गोपाल कृति, रत्नप्रसाद काफ्ले, मदन तामाङ्ग, ठूले दोभान अरुण कोइमी, शकुन आँसु, नर्वदा नवोदित, धर्मराज पौडेल, राम बस्नेत, वसन्त भण्डारी ‘असफल’, लक्ष्मी रिजाल, सुसम आचार्य, अर्जुन विक, युवक केसी, दिनेश डीसि, शीकर सुमन, अर्जुन बाराहाली, पारु थापा, रमेश लामा, अम्विका दाहाल, निरु शितलु, सीताराम सिआर यात्री, शिवहरि राई, सन्तोकी सन्तोष भट्टराई, हिराप्रसाद दाहाल ‘शीतलव’, विदुर समीप, बविन राई, लक्ष्मी राई, नगेन्द्र मगर, शोभा केसी, प्रयास राई, कुसुम राई, जीतन राई ‘समीप’, अविरल कोइमी, मुकेश राई, विनोद खतिवडा, दिपेन्द्र थुलुङ, जीवन भुजेल, बोनमप्रताप मल्ल, युवराज आरोही मगर, मिलन राई प्रतीक, विकास मुस्कान मगर, रूपा चाम्लिङ, सविता तिमल्सिना, युवक केसी, रोजिना आचार्य, जुना गिरीजस्ता दर्जनौँ सर्जकहरूको अथक सक्रियताले उदयपुरको साहित्यिक इतिहासको भव्य धरोहर निर्माण भइरहेको छ ।
(क) कविता/हाइकु/गीत/गजल/काव्य विधामा उपलब्धी-
उदयपुर जिल्लाका आदिकवि भनिने लोकनाथ पोखरेल (१९३३-१९९४) को ‘लोकमञ्जरी’ (०१६, कविता सङ्ग्रह) प्रकाशन भएको छ । रूपाटार निवासी कवि ललिबहादुर खड्का (१९६० तिर) ले समेत कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरेको देखिन्छ तर त्यो प्राप्य छैन । त्यसै गरी जनकवि गम्भीरबहादुर थापा (१९७१-०६५) को ‘उदय’ साप्ताहिक पत्रिकामा धारावाहिकरूपमा गीत, कविता र सवाई प्रकाशित भएका भेटिन्छ । लोकगीत-झ्याउरे गीत सङ्कलनमा नाम कमाएका हस्ती हुन्- गणेश काफ्ले (१९९० तिर) । उनले ‘हे कलीयुग’, ‘छोरीको हारेको कर्म’ लगायतका दर्जनौँ कविता लेखेको पाइन्छ ।
गोवद्र्धन तामाङ्ग (१९९४) को ‘चिनारी’ (०२६, कविता सङ्ग्रह), शिवहरि राई (००४) को ‘उदयपुरको प्रतिविम्ब’ (०५९, कविता सङ्ग्रह), कुमारसिंह कार्की (००५) को ‘भजन’ (०६५, भजन सङ्ग्रह) र लेखबहादुर कार्की (००५) को ‘जीवन पुस्तिका’ (०६२, कविता सङ्ग्रह) प्रकाशित छन् । त्यसै गरी तेजनारायण शेर्पा (००६) ले ‘रौतारानी भगवतीको चिनारी’ (०५३, चम्पूकाव्य) र ‘अधुरो’ (०५६, कविता सङ्ग्रह) गरी दुई कृति प्रकाशन गरेका छन् । लक्ष्मीप्रसाद दाहाल (००८) को ‘लुकेको पीडा’ (०५९, कविता सङ्ग्रह), विश्वराज ढुङ्गानाका (००९) को ‘आमाको व्यथा’ (०६१, गीति सङ्ग्रह) समेत सार्वजनिक भएका छन् । शान्तिकुमारी राई (०१३) ले ‘दश कविता’ (०३४, कविता सङ्ग्रह), ‘संघर्षशील जीवन’ (०४१, कविता सङ्ग्रह), ‘आमाको सपना’ (०४६, कविता सङ्ग्रह), ‘चेतना’ (०६४, कविता सङ्ग्रह), ‘टैकामा’ (०६५, चाम्लिङ भाषाको कविता सङ्ग्रह), ‘टुङमाखीम’ (०६४, चाम्लिङ भाषाको कविता सङ्ग्रह), ‘सेम्टु’ (०६५, चाम्लिङ भाषाको कविता सङ्ग्रह) गरी सात वटा कविता कृति सार्वजनिक गरिसकेकी छिन् ।
परशु पहरा (०१४) का ‘सन्देस’ (०६५, काव्य) र ‘मोहनी’ (०६४, कविता सङ्ग्रह) गरी दुई सङ्ग्रह प्रकाशनमा आएका छन् । उद्धव घिमिरे ‘आनन्द’ (०१७) ले ‘एकादेसको व्यथा’ (०६४, लोककाव्य भाग-१) र ‘मेरो पोको’ (०६५, कविता सङ्ग्रह) गरी दुई अनि नन्दकुमारी राई (०२०) ले ‘अविरल याद’ (०५९, हाइकु सङ्ग्रह) प्रकाशन गरेका छन् । मातृका पोखरेल (०२३) का ‘सेतो दरबार छेउबाट’ (०५६, कविता सङ्ग्रह), ‘यात्राको एउटा दृश्य’ (०६०, कविता सङ्ग्रह), र ‘अनुहारहरू’ (०६५, कविता सङ्ग्रह), टीकाप्रसाद पराजुली (०२६) को ‘कन्दराका भावनाहरू’ (०५८, कविता सङ्ग्रह), पार्वती राउत (०२६) को ‘भनसुनको देश’ (०६७, कविता सङ्ग्रह), धनबहादुर श्रेष्ठ (०२७) को ‘सिर्जनाका लहरहरू’ (०४१, कविता सङ्ग्रह), पुन्य कार्की (०२७) का ‘बाघले घाँस खायो’ (०५४, कविता सङ्ग्रह), ‘असल बन्छु’ (०६३, बालकविता सङ्ग्रह) र ‘आस्थाको अग्निपथ’ (०६५, कविता सङ्ग्रह), मोहन गोले (०२८) का ‘भाले वासेन’ (०५६, कविता सङ्ग्रह) र ‘घाइतेको सन्देस’ (०४८, कविता सङ्ग्रह), कपिल ठकुरी (०२९) को ‘कपिलको कल्पना’ (०६१, कविता सङ्ग्रह)प्रकाशमा आएको पाइन्छ ।
त्यसै गरी इन्द्र थापा ‘मिलन’ (०३४) को ‘इन्द्रेणी’ (०६१, प्यारोडी कविता, कविता तथा गीत सङ्ग्रह), मणि कोइमी (०३५) का ‘अनि देस दुख्न थाल्छ’ (०५७, कविता सङ्ग्रह) र ‘जूनको आभा’ (०६१, गजल सङ्ग्रह), प्रदीप हाइट (०३६) को ‘डाइमण्ड डायरी’ (०६३, कविता सङ्ग्रह), विन्दास आरके (०३८) का ‘अपाङ्गका केही पाइलाहरू’ (०६३, कविता सङ्ग्रह) र ‘ज्वारभाटा’ (०६७, गजल सङ्ग्रह), गणेशकुमार दनुवार (०३९) को ‘मेरो सानो घर, मेरो नेपाल’ (०६४, कविता सङ्ग्रह), मीरा शाकोर (०३९) को ‘अनुभूतिका डोबहरू’ (०६१, गजल सङ्ग्रह), प्रकाश ‘पुष्पक’ राई (०३९) को ‘घाँटी रेटिँदै छ’ (०६०, हाइकु सङ्ग्रह), दिवा चाम्लिङ (०४०) को ‘बोखामा’ (०६५, चाम्लिङ भाषाको कविता सङ्ग्रह), हरिकुमारी राई ‘अभागी’ (०४०) को ‘वेदनाका नयनहरू’ (०६४, कविता सङ्ग्रह), सुवास आम्बोटेली (०४६) का ‘अस्विकृत स्विकृत’ (०६०, गजल सङ्ग्रह), र ‘पलहरू’ (गजल सङ्ग्रह), जीवन चाम्लिङ राई (०४६) को ‘हृदयका छालहरू’ (०६३, गजल सङ्ग्रह), सुरेश परियार (०४८) का ‘सुरेशका सुसेलीहरू’ (०६६, गजल सङ्ग्रह), र ‘याद आयो उनको’ (०६८, गजल सङ्ग्रह), जीवन खतिवडाको ‘मातृवियोग’ (०५९, शोककाव्य), देवेन्द्र पोखरेलका ‘स्वर’ (०५९, कविता सङ्ग्रह), र ‘जुठो सुतक निर्णय’ (०६३, कविता सङ्ग्रह), घमानसिंह मगरको ‘जिन्दगीमा सजाएका सपनाहरू’ (०६३, कविता सङ्ग्रह), शाकुराका ‘मनको वह’ (०६४, कविता सङ्ग्रह), राजेश खतिवडाको ‘पोख्न वाध्य व्यथाहरू’ (०६४, गजल सङ्ग्रह) आदि गरी दर्जनौँ उदयपुरे सर्जकहरूले नेपाली साहित्यमा आआफ्ना काव्यात्मक कृतिहरू नेपाली साहित्य भण्डारमा समर्पण गरिसकेका छन् । रामकुमार बस्नेतको गजल सङ्ग्रह समेत प्रकाशित छ ।
टीकाप्रसाद पौडेल, जोतारे धाइवा, दीपक चिन्तक, भागवत राउत, गोपाल कृति, लक्ष्मीकान्त चौधरी, रत्नप्रसाद काफ्ले, मदन तामाङ्ग, ठूले दोभान अरुण कोइमी, शकुन आँसु, नन्दलाल आचार्य आदि राम्रा कविता, गीत र गजल लेख्दै आएका सर्जकहरूमा पर्दछन् । यसका अतिरिक्त नर्वदा नवोदित, धर्मराज पौडेल, राम बस्नेत, वसन्त भण्डारी ‘असफल’, लक्ष्मी रिजाल, सुसम आचार्य, सुरेश परियार ‘सुमन’, अर्जुन विक, युवक केसी, दिनेश डीसि, शीकर सुमन, अर्जुन बाराहाली, पारु थापा, रमेश लामा, अम्विका दाहाल, निरु शितलु, सीताराम सिआर यात्री, शिवहरि राई, सन्तोकी सन्तोष भट्टराई, हिराप्रसाद दाहाल ‘शीतलव’, विदुर समीप, बविन राई, लक्ष्मी राई, नगेन्द्र मगर, शोभा केसी, प्रयास राई, कुसुम राई, जीतन राई ‘समीप’जस्ता दर्जनौँ नयाँ पुस्ताका सर्जकहरू विशेषतः गजल लेखनमा सक्रिय छन् ।
टंक आले मगर, अविरल कोइमी, मुकेश राई, विनोद खतिवडा, दिपेन्द्र थुलुङ, जीवन भुजेल, बोनमप्रताप मल्ल, युवराज आरोही मगर, मिलन राई प्रतीक, विकास मुस्कान मगर, रूपा चाम्लिङ, सविता तिमल्सिना, युवक केसी, रोजिना आचार्य, जुना गिरी आदि सर्जकका कविता, गीत, गजल र हाइकुहरूले वर्तमानको बेथितिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै समाजमा चेतनाको दीप बाल्ने काम गरेका छन् ।
(ख) कथा/लघुकथा विधामा उपलब्धी-
राममणि पोखरेल (००४) का ‘हरिमानको आत्महत्या’ (०६३), ‘सोममाया र शान्ति अभियान’ (०६४), ‘दण्डहीनता’ (०६५), ‘सूचना टाँस’ (०६६) र ‘समयका पाइला’ (०६७) गरी पाँच वटा कथासङ्ग्रह प्रकाशित छन् । शारदाप्रसाद भट्टराई (०१०) को ‘जम्काभेट’ (०५३) कृति प्रकाशित छ । टंकबहादुर आलेमगर (०१५) ले समेत २०६४ सालमा ‘कालो चायाँ’ नामक लघुकथा सङ्ग्रह प्रकाशन गरेका छन् । मातृका पोखरेल (०२३) का ‘सन्त्रस्त आँखाहरू’ (०६१) र ‘घाम झुिल्कनु अघि’ (०६७) अनि पुन्य कार्की (०२७) का ‘मखमली’ (०५७), ‘मध्यरातमा’ (०६२) र ‘बलभन्दा बुद्धि ठूलो’ (०६३, बाललोककथा सङ्ग्रह) गरी तीन वटा र कौशल चेमजोङ (०२८) को ‘भूत’ (०५६, लघुकथा सङ्ग्रह) प्रकाशन भएका पाइन्छन् । कपिल ठकुरी (०२९) को ‘एउटी वेस्या र म’ (०६१), कृष्ण शाह ‘यात्री’ (०३२) का ‘सूक्ष्म शिखाहरू’ (०५६, लघुकथा सङ्ग्रह) र ‘आणविक अस्त्र’ (०६२, लघुकथा सङ्ग्रह), धनुष राई (०३८) को ‘सेतो हस्ताक्षर’ (०५९, लघुकथा सङ्ग्रह) प्रकाशन भएका देखिन्छन् । त्यस्तै सगरमाथा साहित्य परिषद्का सदस्य समेत रहेका नन्दलाल आचार्य (०३०) को ‘गरिमा’ कथासङ्ग्रह सोही परिषद्बाट प्रकाशनको तयारीमा रहेको देखिन्छ ।
(ग) उपन्यास विधामा उपलब्धी-
राममणि पोखरेल (००४) को ‘साहिँली मैया र रसुवाघाट’ (०६१), विश्वराज ढुङ्गाना (००९) को ‘उपहार’, पुन्य कार्की (०२७) को ‘जीवनयात्रा’ (०५६), कपिल ठकुरी (०२९) को ‘काउसोको माला’ (०५५), सूर्यनारायण चौधरी (०३९) को ‘प्रेमको आत्मा’ (०६४) आदि उपन्यास प्रकाशित छन् ।
(घ) नाटक/एकाङ्की विधामा उपलब्धी-
संवाद र अभिनयका माध्यमबाट मानव जीवनका नालिवेली प्रस्तुत गर्ने दृष्यविधा नै नाटक हो । नाटक/एकाङ्की विधामा कथावस्तु, पात्र/चरित्र, संवाद/कथोपकथन द्वन्द्वविधान, भाषाशैली, देशकाल वातावरण, उद्देश्य, अभिनयजस्ता तत्वहरू नभई हुन्न । नाट्य तत्वलाई देखाउन अङ्ग्रेजीको P0ST CARD शब्दलाई रोज्दा श्रेयष्कर हुन्छ । यस शब्दले यसरी नाट्य तत्वलाई देखाउँदछ- (P-plot, 0-organization, S-song, T-thought, C-character, A-atmosphere, R-rhythm, D-dialogue) नाट्य जगत्को कुरा गर्दा, संस्कृत भाषामा कालिदास र भास, ग्रीक भाषामा एरिस्टोफेन्स, यूरेपाइडिज, सोल्फोक्लीज र एस्कीलसहरूको नाम अग्रहरफमा आउँछ । त्यस्तै लेटिन भाषामा पलाउटस, अङ्ग्रेजी भाषामा शेक्सपियर, अस्करवाइल्ड, जर्ज बर्नाड शा अमूल्य रत्न हुन् । जर्मनीका गेटे (गोथे), फ्रान्सका भिक्टर ह्युगो र नर्वेका हेनरी इब्सेनले समेत नाट्य विधामा संसार हल्लाएका छन् । नेपाली नाटक/एकाङ्की विधामा भने पहलमानसिंह स्वाँर, बालकृष्ण सम, गोविन्द गोठाले, विजय मल्ल, गोपालप्रसाद रिमालहरूको नाम अगाडि आउँछ । अहिले भने सरुभक्त र गोपी सापकोटालगायत दिल सहानी, कृष्ण शाह ‘यात्री’, किशन थापा ‘अधीर’, विमल भौकाजी, खेम थपलिया, नन्दलाल आचार्यजस्ता सीमित सर्जकहरूले मात्र नाटक/एकाङ्की विधाको रथ हाँकिरहेका छन् ।
नाटक मञ्चनको मौसम पनि प्रतिकूल भइरहेको अवस्थामा नाटक/एकाङ्की सङ्ग्रह प्रकाशित भइरहेकै छन् । अझ उदयपुरका सन्दर्भमा विरशबाबु शाही, कुष्ण दुलाल, धनुषराज राईहरू रङ्गकर्मीका रूपमा समेत परिचित छन् । वासुदेव कोइराला ‘मुनाल’ (००८) ले सयौँ नाटक लेखी निर्देशन गरेका र केही नाटकहरू ‘हराएको हात’ (०५४) मा समेटिएका छन् । सुरेश कार्की (०१२) को ‘वस्ती फेरिँदा’ (०४६), नन्दलाल आचार्य (०३०) को ‘युग उचाल्ने अक्षरकर्मीको अवसान’ (०६७) र ‘टुक्के दिदी र उखाने दाइ’ (बालएकाङ्की सङ्ग्रह, प्रेसमा), कृष्ण शाह ‘यात्री’ (०३२) का ‘समय अवसान’ (०६१), ‘मान्छे-मान्छेहरू’ (०६४), ‘फुच्चे रोबोट’ (०६५, बालनाटक सङ्ग्रह), हिङपाङको चाँैरी (०६५), ‘निर्वासित मनहरू’, ‘जलपरी’, ‘खैरे खस्यो खोलामा’, र ‘अतिरिक्त यात्रा’ गरी आठ ओटा नाट्यकृति प्रकाशन देखिन्छन् । उनले ‘प्रतिनिधि नेपाली नाटक’ र ‘प्रतिनिधि नेपाली बालनाटक’ गरी दुई नाट्यकृति सम्पादन समेत गरेको देखिन्छ । ठूले दोभान ‘अरुण’ (०३९) को ‘क्रान्ति नायक’ (०६५) आदि उदयपुरे सर्जकका हालसम्म प्रकाशित नाटक/एकाङ्की विधाका कृतिहरू हुन् । यसका अतिरिक्त फुटकर नाटक/एकाङ्की लेखनमा रामप्रसाद दाहाल, विश्वराज ढुङ्गाना, कुमार खड्का, झमक कार्की, माधव पोखरेल ‘निरासी’, गिरीलाल परियार, सुशम आचार्य, विरशबाबु शाही, जोतारे धाइवा आदिले कलम चलाएको पाइन्छ ।
(ङ) निबन्ध/संस्मरण/लेख/जीवनी विधामा उपलब्धी-
अहिलेसम्ममा नारदमुनि थुलुङ (१९६५-०५९) का ‘विर्सेका घटनाहरू र विर्सन नसकेका अनुहारहरू’ (०४५), ‘२००७ सालको क्रान्ति र नारदमुनि थुलुङ’ (०५३), तुलसीप्रसाद रेग्मी (१९८२) को ‘उदयपुर जिल्ला परिचय’ (०४३), राममणि पोखरेल (००४) का ‘सम्झनाका पोखरीमा छचल्किएका छालहरू’ (०५९) र ‘जेल संस्मरण’ (०६०, खण्ड एक), सुरेश कार्की (०१२) को ‘नेपाली महिलाहरूको भविष्य’ (०४३) र ‘टिन्वत यथार्थ र चुनौती’ (०४६), माधव पोखरेल ‘निरासी’ (०२१) को ‘मुसालाई मुद्दा’ (०६८, हास्यव्यङ्य निबन्ध सङ्ग्रह), पुन्य कार्की (०२७) का ‘कविको छैटौँ इन्द्रिय’ (०६०), ‘हर्कुलसको खोजी’, ‘बलिदानीका गाथाहरू’ (०६४, सहिद जीवनी), ‘महान् व्यक्तिका प्रेरक प्रसङ्गहरू’ (०६४, भाग १-४) र राजदेव सिंहको वारेमा धारावाहिक जीवनी प्रकाशित, मोहन गोले (०२८) का ‘यस्तो हुनुपर्छ उदयपुरको पुनसंरचना’ (०६५, हाते पुस्तिका), ‘आदिवासी जनजाति उत्पीडन र मुक्तिको सवाल’ (०६८, लेख सङ्ग्रह), कपिल ठकुरी (०२९) को ‘अङ्ग्रेजी माने स्वास्नी मान्छे’ (०६०), कृष्ण शाह ‘यात्री’ (०३२) को ‘रङ्गकर्मी हरिवहादुरको जीवनी’ (०६३), कुमारसिंह कार्कीको ‘स्वास्थ्योपहार’ (०६२), र ‘अमृमय जीवनपथ’ (०६४, भाग १,२), कौशल चेम्जोङको ‘उदयपुरको पर्यटन विकास, सम्भावना र विकास’ (०६१) आदि कृतिहरू प्रकाशन भएका पाइन्छन् । विनोद कटुवालको ‘सहिदहरूको जीवनी’ र रामबहादुर थापाको लेख सङ्ग्रह समेत प्रकाशित छ ।
इन्द्र राउत, इन्द्र थापा, जोतारे धाइवा, दीपक चिन्तक, नन्दलाल आचार्य, जीवन चाम्लिङ, शकुन आँसु, एकराज भण्डारी, महेश्वर चाम्लिङ, भोजराज राई, वुद्धि चाम्लिङ, बोधकुमार घिमिरे, भरत खडका, डिल्लीराम खतिवडा, कुशलवावु बस्नेत, लीला निरौला, लक्ष्मीकान्त चौधरी आदिले पनि फुटकर निबन्ध/संस्मरण/लेख/जीवनी विधामा कलम चलाएका र चलाइरहेका छन् ।
(च) समीक्षा/समालोचना/शोध, खोज र अनुसन्धान क्षेत्रमा उपलब्धी-
छत्रबहादुर बस्नेतको ‘नेपाली साहित्यमा उदयपुर जिल्लाको योगदान’ (०५८, अप्रकाशित शोध), चन्द्रकला खनालको ‘पुन्य कार्कीको जीवनी, व्यक्तित्व र कृतित्वको अध्ययन’ (०६३, अप्रकाशित शोध), पवित्रा नेपालको ‘राममणि पोखरेलको जीवनी, व्यक्तित्व र कृतित्वको अध्ययन’ (०६५, अप्रकाशित शोध), चक्रव्यू थापाको ‘मातृका पोखरेलको जीवनी, व्यक्तित्व र कृतित्वको अध्ययन’ (०६५, अप्रकाशित शोध), शारदादेवी खतिवडाको ‘उदयपुर जिल्लाका कथाकारका कथाहरूको अध्ययन’ (०६६, अप्रकाशित शोध), नन्दलाल आचार्यको ‘स्तरीय मैथिली भाषा र स्तरीय नेपाली भाषाका व्याकरणिक कोटिको व्यतिरेकी अध्ययन’ (अप्रकाशित शोध) आदि शोधपत्र क्षेत्रमा गरिएका कार्यहरू हुन् । रामप्रसाद दाहालको ‘सिङ्गो नेपाली भाषा साहित्यको इतिहास र साहित्यकारको परिचय’, पुन्य कार्कीको ‘उदयपुरको साहित्यिक इतिहास ः सतही अभिरेखाङ्कन’ आदि समेत यस क्षेत्रका उपलब्धी हुन् । त्यस्तै टीकाप्रसाद पौडेल, दीपक चिन्तक, कैलाश राई, जोतारे धाइवा इन्द्र राउत आदिले समेत समीक्षा/समालोचना/खोज/अनुसन्धान क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका छन् ।
(छ) अनुवाद क्षेत्रमा उपलब्धी-
पुन्य कार्की (०२७) का ‘शिक्षामा क्रान्ति’ (०६७) र ‘ओशोका कथाहरू (माटोको दियो)’ (०६७) र विनोद कटुवालले ‘चे ग्वेभाराका रचनाहरू’को अनुवाद गरेका छन् । नन्दलाल आचार्यले ‘समय छैन’ शीर्षकको मैथिली अनुवाद कविता असार, २०६९ को ‘गरिमा’ पत्रिकामा प्रकाशित गरेका छन् । उनका हिन्दीबाट अनुवाद गरिएका ओशो साहित्यका विविध रचनाहरू समेत विविध पत्रिकाहरूमा प्रकाशित छन् । विश्वराज ढुङ्गाना, राममणि पोखरेल आदिले समेत फुटकररूपमा कलम चलाएका छन् ।
उदयपुरका केही साहित्यकार र तिनका साहित्यिक विशेषताहरू-
(१) लोकनाथ पोखरेल (१९३३-१९९४)- उदयपुरे साहित्यिक इतिहासमा १९९० सालको भूकम्पको वर्णन, तत्कालीन समाजको वस्तुस्थितिको वोध, नैतिक र आदर्श मूल्यमान्यताप्रति सजगता, सन्तानलाई आशीर्वचनजस्ता विशेषता सहित कवि लोकनाथ पोखरेल (१९३३-१९९४) को ‘लोकमञ्जरी’ (०१६) कविता सङ्ग्रह देखापर्दछ ।
(२) गम्भीरवहादुर थापा (१९७१-०६५)-
आफ्नै घरमा खानु, नेपाली खानु आफ्नु मानु
धेरै, निकै नेपाली लाहुर (विदेश) किन जानु ?
३. उदयपुरे राजनीति इमान्दार छैन
माथिका हरफका रचयिता गान्धी पथका कट्टर अनुयायी कवि गम्भीरबहादुर थापाका वारेमा साहित्यकार पुन्य कार्की भन्दछन्- ‘कवि थापा अँध्यारोको कालो धुस्सा च्यात्नै हिँडेका थिए । नेपाली दुखिया समाजलाई जाडो र भोकबाट, अशिक्षा र अन्धकारबाट मुक्त गर्नै हिँडेका थिए । तर, निर्दयी समाजले कति बुझ्यो होला; यिनले सिकाएका दया र प्रेमका पाठहरू । निष्ठुर समाजले कति बुझ्यो होला, यिनले सिकाएका सत्य र न्यायका कथाहरू । पापी र क्रुर समाजले कति बुझ्यो होला, यिनले जीवनभरि घोकाएका करुणा र विवेकका सूत्रहरू । बेइमान र ईष्र्यामा अडेको समाजले कति बुझ्यो होला, इमान र नैतिकताका पाठहरू । परालम्वी परनिर्भर समाजले कति बुझ्यो होला, यिनले सिकाएका स्वाबलम्वी तथा स्वनिर्भर संस्कृतिका पाठहरू । समाजले बुझोस् नबुझोस् यी जागापुरुष अहिले पनि अनवरत सत्य र न्यायका स्वरहरू घन्काइरहेका छन् । सत्यको बाटोमा जाडो टेकेर अविरल हिँडिरहेका छन् । यिनलाई मैले जागापुरुष यसर्थ भनिरहेको छु- गम्भीरबहादुर थापाको कर्म नै मान्छे जगाउनमा समर्पित छ । निस्लोट सुतेको मान्छेलाई जागरणमा ल्याउन यिनले भगीरथ प्रयत्न गरे । विभिन्न प्रतीकात्मक तरिकाहरू अपनाए । तर जडअचेतनामा युगयुगदेखि आनन्दले घुर्दै आएको मान्छेले, अनि उठ्नुमा भन्दा कोल्टे फेरेर सुत्नुमा गर्व मान्ने समाजले पित्को बराबर पनि यिनले सिकाएका सूत्रहरू अपनाएन । यिनले अपनाएका जीवनशैलीबाट केही कुरा पनि लिनसकेन । यिनले सिकाएको दया, प्रेम, करुणा र न्यायको पाठ समाजका दुई प्रतिशत मानिसहरूले बुझेका भए मात्र पनि यो समाजको मुहार अर्कै हुन्थ्यो होला । हाम्रो समाज यस्तै दीनहीन, रुग्ण, अकर्मण्य र निर्दयी हुनेथिएन होला । यिनलाई बुझ्ने र सम्मान गर्ने कुरामा समाज सय वर्षै पछाडि परेको छ । यिनका नातागोता, आफन्त, भाइवंशज, छोराछोरीहरू समेत बाटोमा यिनलाई देख्ने वित्तिकै मुन्टो बटारेर तर्कीतर्की हिँडेको देखेको छु । उनलाई देख्ता बेइज्जत भएको ठान्ने आफन्तहरू पनि छन् यहाँ । साँच्चै गम्भीरबहादुरलाई बुझ्ने हो भने उनी उदयपुरका इज्जत हुन् । अझ व्यापक आयामबाट हेर्दा उनी देशकै गर्विला सम्पत्ति हुन् । यो सत्यलाई अनाडीहरूले कहिल्यै बुझेनन् । उनले बोरा ओडेर हिँडेको देख्ता नदेखेजस्तो गर्ने सफे दपोशहरू देखेको छु । जाडोमा धुनी बालेर गरिबका बच्चा सेकेको देख्ता ओठ बटार्ने इज्जतदारहरू देखेको छु । उनले सत्य र सुनीतिको भाषण दिँदा नाक चेप्र्याउने ठालुहरू देखेको छु ।’
यस्ता विचार र भावनाबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ भने शोषितपीडित जनताप्रति गम्भीर चासो राख्नु, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको गम्भीर संवेदनशीलतामा सचेत रहनु, समाजप्रतिको दायित्वबोधको आभाष हुनु, अग्रगामी राजनैतिक चेतनाले ओतप्रोत रहनु र सामन्तीसंस्कार, दासमनोवृत्ति, सामाजिक एवं आर्थिक शोषणले लाटो पारिएका मनहरू ब्युँझाउनु साथै निरास जनताका मनहरूमा आँट र उत्साह छर्नुजस्ता विशेषता लिएर उदयपुरे जनकवि गम्भीरबहादुर थापा (१९७१-०६५) देखापर्दछन् । उनका ‘उदय’ साप्ताहिक पत्रिकामा धारावाहिकरूपमा गीत, कविता र सवाई प्रकाशित छन् । उनको सम्मानमा गम्भीर साहित्य प्रतिष्ठान, उदयपुरले ‘गम्भीरबहादुर थापाको कृतित्व र व्यक्तित्व’ नामक अभिनन्दन ग्रन्थ (२०५९) प्रकाशन गरेको छ । समाजमा देखिएका विसङ्गत पक्षलाई झटारो हान्न जनकवि गम्भीरबहादुर थापाले विल्कुलै भुलेका छैनन् ।
(३) गणेश काफ्ले (१९९० तिर)
शिवहरि दुनियाँभरि, छैन धर्म भइसक्यो मनपरि
बह्म ज्ञान, जातिपाति, धर्मकर्म फाले
परम्परा कर्तव्य नै भुले जनताले
गरिवको पसिना भो, शोषकीको धन
परिश्रमी दुःखी बने खान नपाईकन ।।
यी हरफका रचयिता काफ्ले लोकगीत-झ्याउरे गीत सङ्कलन र गायनमा नाम कमाएका छन् । हलेसी महादेवको दर्शनार्थ वीरेन्द्र राजाको सवारीको बखत उनले गीत आफैँले लेखेर सुनाएका थिए । उनको आँसु कवि व्यक्तित्वबाट प्रभावित भई राजाले आफ्नै साथ काठमाडौँ लगेका थिए । उनले ‘हे कलीयुग’, ‘छोरीको हारेको कर्म’ लगायतका दर्जनौँ कविता लेखेको पाइन्छ । उनी परिस्थितीलाई टपक्क टिपेर काव्यात्मक रूप दिन माहिर देखिन्छन् ।
उनको ‘छोरीको हारेको कर्म’ शीर्षकको गीत त्यस बेला चर्चित थियो । रामायणका श्लोकजस्तै हरेकका ओठओठमा झुण्डिएको पाइन्छ । यसो हुनुको खास कारण के थियो भने त्यस बेला उदयपुरमा समाचार सुन्न या पढ्नबाट बिल्कुलै बञ्चितजस्तै थियो । कविहरू कविता, श्लोक र सवाईमार्फत नै एकठाउँको खबर अर्को ठाउँमा पुर्याउँथे । प्रस्तुत छ, सोही कविताको एक अंश-
दाजुभाइ दिदीबहिनी तिम्रै शरण पर्छु
दुःखी चेली विचरीको अब वयान गर्छु ।
सोह्र वर्षे उमेरमा विहे भाको छैन
यो मनमा लड्छ पहिरो केही रहँदैन ।
(४) राममणि पोखरेल (००४)- उनका ‘हरिमानको आत्महत्या’ (०६३), ‘सोममाया र शान्ति अभियान’ (०६४), ‘दण्डहीनता’ (०६५), ‘सूचना टाँस’ (०६६) र ‘समयका पाइला’ (०६७) गरी पाँच वटा कथासङ्ग्रह प्रकाशित छन् । (क) निम्न स्तरीय ग्रामीण जनजीवनमा देखिएका आर्थिक सवाल अन्तर्गत भएका कटु यथार्थहरूको चित्रण, (ख) नयाँ पुस्ताको अदूरदर्शी नीतिबाट भएको पारिवारिक विचल्नीको चर्चा, (ग) राजनैतिक विकृतिको भण्डाफोर, (घ) भौतिक अभाव र असन्तोषबाट सिर्जित अन्यौलताको वर्णन, (ङ) पत्नीप्रेमभन्दा राष्ट्रप्रेम ठूलो अर्थात् परिवारभन्दा मुलुक ठूलो भन्ने भावना सम्प्रेषण, (च) राजनैतिक नारा र जुलुसले हैन मान्छेमा अन्तर्निहित चेतनाबाट सांस्कृतिक रूपान्तरण हुनसक्ने सम्भावना औँल्याउनु, (च) तराईमा रहेका सशस्त्र समूहहरूको लुटपाट, सन्त्रास र अपराधिक मनोदशालाई केलाई सही मार्गमा लागी राष्ट्रका सच्चा नागरिक हुन आह्वान् (छ) भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको घोर विरोध, (ज) आडम्बरी पात्रको जीवनचर्यालाई समेत देखाई निमुखा वर्गप्रति श्रद्धा, (च) जनतालाई एकताको सूत्रमा बाध्न र राहत दिलाउन आह्वानजस्ता कथागत विशेषता लिएर उनी कथा साहित्यमा देखापरेका छन् ।
(५) लेखबहादुर कार्की (००७)- वि. सं. २००७ साल मङ्सिर १५ गते उदयपुर जिल्लाको दुर्गम ठाउँ बाराहा गाविस वडा नं.-३ मा जन्मेका देशका कुनाकाप्चा घुम्दै र वस्तुस्थिति बुझ्दै जनताको पक्षमा कविता र फुटकर लेखहरू लेख्दै आएका फिरन्ते कवि कार्कीले २०५८ साल भदौ १८ गतेदेखि कविता र फुटकर लेखहरू लेख्न थालेका हुन् । अहिले उनले घुमफिर र लेखन कार्यमा आफ्नो जीवन पूरै संलग्न पारेका छन् ।
...नेताले नेपाल खाएको देख्दा, ज्ञानेन्द्रले नेपाल मासेको भेट्दा, सेनाले जनता मारेको पाउँदा, क्रान्तिकारी हुँ भन्नेले सामन्तलाई छाडेर निमुखा वर्गलाई पिरोलेको देख्दा, ठूलाबडाले गरिव निमुखालाई सताएको पाउँदा, वनजङ्गल मासेर मोजमस्ती गरेको भेट्दा टुलुटुलु हेर्न सकिनँ र लेखेँ । तिनीहरूको कर्तुत जनताका सामु राखिदिएँ । जनतालाई सुनाउँदै गएँ । मैले आम जनताका दुःख-वेदना लेख्ने र गाउने गरेको छु । हुन त मैले पाएको केही छैन, पाउने लालच राखेर संसार चहार्दै हिँडेको पनि हैन । तर पनि कतै न कतै केही न केही पाइरहेकै छु—कतै धम्की पाएँ, कतै गालीगलौज भेटेँ । कतै पागलको संज्ञा पाएँ त कतै मगन्तेको बिल्ला भेटेँ । कुनै कुनै सज्जन महानुभावहरूबाट भने मैले ठूलो सन्तोष पाएको छु । आफ्नो अभियानलाई अघि बढाउने ज्ञान भेट्टाएको छु । राम्रो काम भएको पाउँदा गुनगानका गाथा पनि गाएको छु । मेरो लिनु र दिनु केही छैन । नेता सप्रे र भोलिका पुस्ताका लागि नेपाल बचाइदिए, क्रान्तिकारी एवं परिवर्तनकारीहरूले बाटो नविराए र सिर्फ जनता जागे अनि विकृतिका विरुद्ध लागे म आफूलाई धन्य ठान्नेछु....भन्ने कवि कार्कीको मुखरावृन्दका आवाज सुन्न नन्दलाल आचार्यले एक संस्मरणात्मक लेखमा लेखेका छन््...
माथिको आवाज सुन्नका लागि मैले मच्छडको राजधानी छोड्नु पर्ने रहेछ । म त्यसकै लागि कहिले विश्रान्ति लिन पाइन्छ कुन्नि ! भन्दै थिएँ । कहिल्यै मौका मिलेको थिएन । त्यत्तिखेर केही घण्टाका लागि मात्रै भए पनि मुक्ति पाउने अवसर प्राप्त गरेथ्यो- जनमत साहित्यिक मासिकले ! आजीवन सदस्य भएवापत मैले पाउनुपर्ने जनमतका अङ्कहरू मोतिगडाका पुन्य कार्कीकहाँ आउथे । तिनै पत्रिका लिनका लागि म पनि पुगेको थिएँ- मोतिगडा । बल्लतल्ल फुर्सद मिलेको क्षण, अर्कातिर बौद्धिकताले खारिएका पुन्य सरका गहकिला कुरा अनि विलकुलै नयाँ ठाउँ र म समेत त्यस ठाउँका लागि नयाँ मान्छे । यिनै कुराहरूको मिश्रण थियो त्यस बेला । म अगस्त्य मुनि भएर कुरा सुनिरहेको थिएँ । म्याडम सुसेधन्दामा व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ । सरका छोराछोरी चाहिँ स्कूलको गृहकार्य बनाउन तनमनले जुटेका थिए । सायद पिताजी तल्तिर पूजापाठमा अल्झनु भएको हुनुहुँदो हो । एक वृद्धावस्थातिर उक्लदै गरेका व्यक्ति पुन्य सरको आँगनमा ठिङ्ग उभिए । देख्न त मैले मात्रै देखेको रहेछु । म सामान्य कोही होला भन्ठानेर चुपचाप गफ सुन्नमै अल्झने प्रयत्नमा थिए । त्यत्तिक्कैमा पुन्य सरले तिनलाई देखिहालेछन् । उनले ‘लेखबहादुर दाइ ! माथि नै आउनुस्’ भनी आदरभावले बोलाए । मसँग परिचय गराए । मैले पनि उनको परिचय उनको मुखबाट कम तर पुन्य सरबाट बढी बुझ्न पाएँ । उनी सङ्कोची रहेछन् । मसँग खुलेर बोल्न पनि हच्किए । सेनाले मारमा पारेका रहेछन् उनलाई, कतिपय क्षणमा माओवादीबाट त्रास समेत भोगेका रहेछन् । एकातिर उनी धन नभएका मान्छे रहेछन्, अर्कातिर मन भए पनि विसाउन र खोल्न अवसर नभेट्टाएका मान्छे रहेछन् । निकै बेर पछि उनले केही हदमा मन खोले तर अल्प, अल्प मात्र ! केही हदमा मनका मैलाघैला मेरै अगाडि बगाए, त्यो पनि विल्कुलै झर्रा शब्दहरूमा !
उनको भनाइमा त्यस्तो कुनै जादुगरी पाइनँ । पीडाका कुरा थिए, वेदनाका रहस्यहरू लुकेका थिए । मुलुक नै लामो द्वन्द्वबाट बल्लतल्ल तङ्ग्रिदै थियो । शान्तिको श्वास फेर्ने चाहना सबैलाई थियो । तर, कुन बाटो हिँड्दा शान्ति प्राप्त हुन्छ, त्यस बारे सोच्ने फुर्सद कसैलाई नभएको आभाष हुन्थ्यो । पुन्य सरकै सङ्केतमा उनले मलाई दिनका लागि झोला खोले । त्यस्तो के दिन लागे ! म स्तव्ध भएँ । उनले झोलाभरि ‘जीवन पुस्तिका सङ्ग्रह’ (२०६५) नामक कविता कृति बोकेका रहेछन् । झोला खोतलखातल पार्दापार्दै तीनओटा मोटामोटा कापी र एउटा किताव निकाले । ती कापीमा कविता, निबन्ध, कथा र लेख लेखिएका थिए । ‘जीवन पुस्तिका सङ्ग्रह’ नामक कृति चाहिँ मलाई थम्याए । उक्त कृति बारे केही लेख्नुपर्ने कुरा महसुस भयो । तर, के लेख्ने ? वर्णविन्यासगत त्रुटिहरू मनग्यै देखेँ । कविता कृति भन्न सुहाउने गद्यात्मक शैलीका केही रचना थिए भने एकाध भने आख्यानात्मक रचना पनि समेटिएका थिए । सरर्र पढ्दा रस नबसका गनगन लागे । मैले बूढापाका कुरा त्यत्ति पढेको थिइन् । त्यसैले दिलचस्पी राख्ने कुरा पनि आएन । म वेवास्था भावमा बसिरहेको थिए । प्रौढ मनस्थितिका पाका कुरा तर काँचो शैलीमा पस्किएका थिए । मजस्तो अल्लारे ठिटाका निम्ति ती त्यत्तिखेर पच्य भएनन् ।
पछि उनका कुरा सुनेँ । विस्तारै चाख बढ्दै गयो । उनले इमान्दारीपूर्वक फलाक्दै गए- ‘हेर राजविराजमा बस्ने नानी ! उमेर पनि खाइयो । उदयपुर जिल्लाका कुनाकाप्चा पनि घुमियो । जहाँ पुगियो, त्यही घर आफ्नो सम्झिइयो । हेर्नुस्, मैले जस्तो दुःख झेलँे नि त्यस्तो चाहिँ अरूले झेल्नु पर्दै नपरोस् भन्ने आकांक्षा मनमा राखेको छु । र, दुःखको दह पुरियोस्, सुखको धर्ती बनोस् भन्ने कामना र चाहना मनमा राख्न थालेँ । त्यसैले सकुञ्जेल हिँडिरहेछु, जनता जगाइरहेछु । देखेको लेखेँ, लेख्दैमा पनि हण्डर खाएँ । पछुतो छैन जीवनमा । यसरी नै बाँच्ने क्रममा छु ।’
कतिपय ठाउँमा उनले भाका मिलाए, कतिपय ठाउँमा कुरा छोट्याए । थोरै बोल्न रुचाउँथे । म पनि उस्तै, थोरै सुन्न रुचाउँथे । जे होस्, लेखकका रूपमा म उनका कुरा विश्लेषण गर्न थालेँ । केही कुरा मन परे । एक स्नेप फोटो पनि लिएँ । अनि, उनीसँग विदा पाएँ । उनीसँग छुटेपछि मैले उनको जीवन कहानीलाई पटकपटक सम्झिएँ । ‘म वोर्डिङ्ग स्कूलमा जागिरे भएर दुईचार पैसा आम्दानी गर्ने मान्छे भए पनि खासमा साहित्यमा केही गर्न सकेको थिइन । ‘युग उचाल्ने अक्षरकर्मीको अवसान’ नामक नाटक/एकाङ्की सङ्ग्रहको पाण्डुलिपी थन्किएको धेरै काल वितेको थियो । प्रकाशन गर्ने तरिका र पूँजी लगानी गर्ने हिम्मत पनि थिएन । पानीमरुवा नै भइएको थियो । त्यस बेला कार्कीको साहित्य संसारमा हिँडिरहने हिम्मत र ‘जीवन पुस्तिका सङ्ग्रह’ जस्तो कृति मेरो लागि भानुभक्तले घाँसीबाट पाएको प्रेरणा सरह भएको थियो । सिर्फ साक्षर बनेका र सामान्य गाउँले जीवनको रसबसमा अल्मलिएका व्यक्ति पनि आफूलाई साहित्य संसारमै हराउन सक्छन् भने वातावरण पाएका र अझ धेरै पढेका हामी उठेका भनिएकाहरू किन सुतिरहेका छाँै ? आर्फैंलाईं धिक्कार्न मन लाग्यो ।
अझ मैले ‘जीवन पुस्तिका सङ्ग्रह’को सानो परिचय पत्रिकामा लेखिदिए पछि चाहिँ उनले मलाई विश्वास गर्न थालेँ । यो मान्छेले नचिनिएकाहरूलाई चिनाउने काम पनि गर्दो रहेछ भन्ने लाग्यो क्यार ! उनी बेलाबेलामा मसँग फोनवार्ता गरिरहन्छन् । हालखबर बुझिरहन्छन् । उनलाई मेरो वारे चिन्ता छ, मलाई भने एक प्रौढ कवि व्यक्तित्वले उचित परिष्कार र प्रकाशनको मौका नपाएकोमा दुखेसो छ । उनले लेखेका कुराहरूमा परिष्कार र परिमार्जन गर्न सुझाव दिएर धेरथोर सैद्धान्तिक राजमार्ग देखाइदिने काममा कसैले उत्तिसाह्रो चासो राखेको भेटिनँ । उनीभित्र साहित्यको सागर छ, म त्यो बुझ्दछु तर त्यो सलल बग्न सकिरहेको छैन । सैद्धान्ति बाधाअड्चन फुकाउ गरिदिने हो भने, त्यो पनि निश्चित मार्ग भएर बग्थ्यो । अहिलेसम्म उनका पाण्डुलिपीमा निश्चित राजमार्गमा हिँड्न नसकेका धेरै रचनाहरू देखेको छु । आ-आफ्नो प्रतिक्रियात्मक विचार दिएर कविजीलाई प्रोत्साहन दिनु र गोरोटे देखाइदिनु जरुरी रहेको ठान्दछु । गोर्खे साइलोजस्तो आफ्नै बरबुताले साहित्य संसारको धरोहर बन्न सबै लेखबहादुरहरू सक्तदैनन् । कारण साइलाहरू विज्ञान-प्रविधिको संसारमा छन् तर लेखबहादुरहरू डोके-नाम्ले युगमै छन् ।
मसँग त साहित्य वारेमा समेत उनी बडो चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । सम्पूर्ण रूपले नेपाली साहित्यमा समर्पित फुलटाइमर साहित्यकारको झलक दिन्छन्-
‘नन्दु भाइ ! आरामै हुनुहुन्छ ?’
‘हजुर । नमस्कार ! हजुर चाहिँ कताबाट बोल्दै हुनुहुन्छ ?’
‘नमस्कार ! म जलेश्वरदेखि उत्तरतिर गाउँघरमा छु । तपाईंसँग भेट गर्ने मन थियो !’
‘आउनुहोला नि त ! यहाँ राजविराजका पत्रकार साथीहरूलाई समेत भनिसकेको छु । हजुरले आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्नुपर्छ नि !’
‘एउटा पोस्तक निकाल्नु भनेको खर्चबर्चले भ्याएको छैन । छापाखानामा कम्प्युटर गर्दै छन्, त्यसलाई एक पटक हेरिदिने मान्छे भएदिए हुन्थ्यो ।’
‘त्यहीँ त पुन्य कार्कीजी हुनुहुन्छ । आवश्यक सल्लाह र सहयोग पाउनसक्नु होला कि !’
‘अब त्यसै गर्नुपर्ला । ल त, नन्दु भाइ ! फुन राख्दै छु । पछि फेरि गफसफ गर्दै गरौँला है त !’
‘हवस् हजुर ! नमस्कार, लेखबहादुरज्यू !’
‘नमस्कार ! नन्दु भाइ !’
अहिले उनी के गर्दै छन् र उनको कस्तो कृति प्रकाशन भइसक्यो या बाँकी छ, तत्कालको जानकारी मलाई थाहा भएन । मलाई लाग्छ- अरू कवि/कलाकारहरू सहरका सेवासुविधा र मलजलमा हलक्क भएर लहलह हुर्के । परिष्कार र परिमार्जनको अनुकूल वातावरण पाएर क्षेत्रप्रताप अधिकारी, हेम हमाल, मञ्जुल, तोया गुरूङ, विमल निभा, सरुभक्त, हरि अधिकारी, कृष्णभूषण बल, मातृका पोखरेल, पुन्य कार्की, रामविक्रम थापाहरू बने । तर, लेखबहादुरहरू गाउँकै पाखा पखेराहरूमा टाँसिएर अल्झिरहे । जहाँको त्यहीँ रहन विवश भए । अघि बढेकाहरूलाई आधुनिक युगको उज्यालोले चम्कायो र टलक्क टल्कने बनायो । तर, लेखबहादुरहरू अँध्यारो बस्तीका जूनकीरी भएर पिलपिलाई रहेका छन् । हिजोदेखि आजसम्म गाउँघर घुम्दै छन्, हाल खबर बुझ्दै छन् र कापीका पानाहरू भर्दै छन् । यसै सन्दर्भलाई खोटाङका कवि जसराज किरातीले मार्मिक ढङ्गले ओकलेका छन्-
यत्रो अँध्यारो महासागरको वरिपरि
म एउटा सानो जूनकीरी
पिलपिल बलिरहेछु ।
अनि लेखनाथ पनि ग्रामीण परिवेशका सरल र जीवन्त बिम्ब एवम् प्रतीकहरूले सिँगारेर कविता लेख्न माहिर छन्-
अध्यक्ष, शिक्षक मिलेर, स्कूल जाला बिग्रेर ।
शितल हुन्छ छाँयाले, बालक पढ्छन् मायाले ।
उनका कविताले समाजका बेथिति, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचारप्रति आक्रोशपूर्ण झटारो प्रहार गर्न भने छाडेका छैनन् र शोषित, पीडित, उपेक्षित वर्गको सर्वोपरी हितमा समर्पित विचार राख्न उनी खप्पिस देखिन्छन् । तर, दुर्भाग्य ! आफ्नै पृथक् शैली, अभिव्यक्ति र शिल्पमा नवीनता हुँदाहुँदै पनि ती पहाडी झरनाझैँ कञ्चन, स्पातिला र ऊर्जावान् भने छैनन् । छन त छ- कविको आफ्नै काव्यात्मक धर्ती छ, आफ्नै पौरखी आकाश छ र आफ्नै वैयक्तिकपनको खुल्ला क्षितिज छ । उनको सुन्दर आफ्नै प्राकृतिक संसार हेर्ने दूरदृष्टि छ । एकसरो लुगा र एकपेट भातका लागि मात्र पनि उनले भरदिन शारीरिक मेहनत गर्नुपर्छ । दुःखको दहमा पौडदै बाँच्न विवस छन् उनी । उनले दुःखलाई मात्र हैन, सुखलाई पनि चिनेका छन् । तर, सुखले चाहिँ उनलाई चिन्दैन । दुःखले मात्र पछ्याइरहेको देखेको छु ।
मलाई भन्न मन लागेको छ, उदयपुर सदरमुकाममा मुकायम भएका साहित्यिक मित्रहरूलाई- उनी गाउँ डुल्छन्, खबर बुझ्छन् । दुरुस्त टिपेर सादा पाना ढाक्छन् । विचार त्यहीँ जन्मन्छ र त्यहीँ मात्र रहन्छ । ती विचाराको विचार राजधानी काठमाडौं वा विराटनगरतिर आउँदै आउँदैन । किनभने उनी अन्त कतै धाउँदै धाउँदैनन् । यिनको गाउँले विचारलाई गाउँले त बुझ्नुपर्छ नि । सहरले बुझ्ने संस्कार त हामीकहाँ बन्दै छैन । समयमा अध्ययन, उचित प्रचार र सम्पर्क बढ्दै गएको भए उदयपुरे यी हस्ती पनि पुरस्कार, सम्मान र पदहरूले ढाकिने सर्जक बन्ने थिए । हैन, साहित्य नितान्त आफ्नै लागि लेख्ने हो भने र समाजलाई त्यागिदिने हो भने कसैले केही भन्नुमा कुनै तुक रहन्न । नत्र भने अहिले पनि केही वितिहालेको छैन, थोरै बौद्धिक सहयोग गरिदिऔँ । यिनबाट उदयपुर अहोभाग्य हुनसक्छ । यिनको त्यागको यात्रामा थोरै भरोसा राखौँ । हामी पनि भाग्यशाली हुनसक्छौँ । भोलि आफू आदरणीय हुनुछ भने हिजोका प्रौढहरूलाई आज आदर गरौँ, भरोसा राखौँ, सम्मान दिऔँ । भोलि आफैं सप्रदै जान्छ, साहित्यको हरियो राजधानी बन्दै जानेछ ।
(६) शारदाप्रसाद भट्टराई (०१०)- उनको ‘जम्काभेट’ (०५३) नामक कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन् । उदयपुर जिल्लाको यो नै पहिलो कथाकृतिका रूपमा देखिएको छ । उनी (क) सामाजिक यथार्थको चित्रणमा रूचि, (ख) समाजसुधारको चाह व्यक्त, (ग) सामाजिक विकृतिको भण्डाफोर, (घ) समाजसुधारको प्रवल चाह प्रकट, (ङ) नैतिकता र आदर्शताको स्थापनामा जोड, (च) ग्रामीण जनजीवनभोगाइलाई दुरुस्त उतार्नु, (च) सांस्कृतिक सम्पत्तिको सुरक्षामा केन्द्रीत हुन आह्वान् (छ) श्रमप्रति श्रद्धाभाव जगाउनुपर्ने भावना अभिव्यक्तजस्ता कथागत विशेषताका साथ कथा साहित्यमा देखिएका छन् ।
(७) टंकबहादुर आलेमगर (०१५)- उनले २०६४ सालमा ‘कालो चायाँ’ नामक लघुकथा सङ्ग्रह प्रकाशन गरेका छन् । समाजमा घटेका यथार्थताका नालीबेलीलाई कलात्मक रूपले प्रकट गर्ने काममा उनी पोख्त देखिन्छन् । विशेष गरेर दुःख, पीडा र बेचैनीका बेलिविस्तार मात्रै हैन अग्रगामी विचारयुक्त लघुकथा पनि पाइन्छन् उनको ‘कालो चायाँ’ लघुकथा सङ्ग्रहमा । उनीबाट मुलुकको अस्मितामाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तत्वले धावा बोलिएको बखत आक्रोश पोख्ने काम समेत भएको छ । युवायुवती बीच हुने स्वभाविक प्रेमअनुरागलाई पनि स्थान दिइएको छ । सप्रिएको राजनीतिले मात्र देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने कथन अघि सारिएको छ । सामान्य वर्गका मानिसहरूप्रति विशेष सहानुभूति राखेर समाजको अस्तव्यस्तताको विरोध गर्ने जस्ता विशेषताले उनका लघुकथाहरू युक्त छन् । यिनबाट युद्धमा पिल्सिएकाहरूको व्यथा सम्बोधन गर्ने काम पनि परोक्षरूपमा भएको छ । मूलभूत रूपमा यिनी समाज रूपान्तरणको पक्षमा मत जाहेर गर्दछन् । कथ्य एवं ठेट भाषाको प्रयोगले कथा रोचक बनेका छन् । रेडियो, टेलिभिजनमा वाचन गर्ने दृष्टिमा भने उपयुक्त देखिन्छन् । उनका धेरै जसो कथाहरू रेडियो नेपालबाट प्रसारण भइसकेका छन् । तर कतैकतै कथावस्तु, पात्रहरू नै किटान गर्न नसकिने अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा लघुकथा, लघुकथाका रूपमा नभएर पोथी गद्यको कुनै रचनाको अंशजस्तो भेटिन्छ । स्पष्ट विचार खुल्न नसकेका लघुकथा पनि यस सङ्ग्रहमा मनग्यै परेका छन् । वर्णविन्यास सम्बन्धी कमजोरी जताततै पाइन्छ । यी विविध कारणले गर्दा भने खोजेजस्तो परिपाक तयार नभएको स्पष्ट झलक मिल्दछ । सामान्य लेखपढको वातावरण पाएका कथाकारका शब्दहरू र भाव सबै व्यावहारिक प्रकृतिका नै छन् । सैद्धान्तिक नजरले हेरेमा उनको उचित मूल्याङ्कन गर्न सकिन्न । कवितात्मक शैलीलाई पक्रेर कथा सिर्जेका छन् । भावसँगै वाचनमा मीठासपन र मधुरतालाई उनले विशेष महत्व दिएको भान हुन्छ । जे होस्, विधागत मान्यताका लागि फस्टाइरहेको र धेरै स्रष्टा साधक समर्पित रहेको लघुकथा विधामा उदयपुर जस्तो ठाउँमा एक साहित्यिक हस्ती उदाउनु र जनताले आफ्ना पिरमार्का सम्बोधन गर्ने कलमजीवि भेट्नु भनेको गर्वको कुरा हो । अर्का कवि, निबन्धकार तथा कथाकार पुन्य कार्कीले भूमिकामार्फत् नै लघुकथाकार टंकबहादुर आलेमगरलाई साहित्य संसारमा आमन्त्रण गरेर लेखन, प्रकाशन, परिष्कार, परिमार्जन र समीक्षणको चौतारी भेटे साहित्यको मन्दिर निर्माणमा उनको देन महत्वपूर्ण हुनसक्ने बताएका छन् । आले मगर कथा लेखनमा निरन्तर सक्रिय छन् । उनको अर्को कथा सङ्ग्रह प्रकाशोन्मुख छ ।
(८) मणिकुमार पोखरेल- रुपाटार-७, उदयपुरमा जन्मेर सुर्खेत कर्मथलो बनाउन पुगेका कवि पोखरेलको ‘श्रद्धाञ्जली’ (२०४८) हो । उनको ‘गोमारत्न’ खण्डकाव्य समेत ०६८ मा प्रकाशित छ । यिनका कवितामा मानव जीवनका विसङ्गति, पीडा, छटपटी, दुःख सँगै राष्ट्रिय चिन्ता र चासो सार्वजनिक भएको पाइन्छ । कवि जन्म दिने आमा र बाबुप्रति जति आदर देखाउँछन्, त्यसभन्दा बढी जन्मभूमिप्रति आस्थावान् देखिन्छन् । उनी भन्छन्-
आशा भन्ने कुरा पनि अचम्मकै मान्छु
हाँस्न बोल्न सघाउने औषधी यो ठान्छु ।
मर्नलाई तयार प्राणी समेत मुक्त छैन
उपस्थित विना यसको लाग्छ संसार हैन ।
(९) मातृका पोखरेल (०२३)- वि. सं. २०२३ साल असार ९ गते (१९६६ जून २३ सन्) उदयपुर जिल्लाको ठानागाउँ गाविस वडा नं.-९ मा जन्मेका र हाल काठमाडाँैलाई कर्म थलो बनाउँदै आएका साहित्यकार पोखरेल कक्षा आठमा पढ्दै गर्दाको कलिलै उमेरमा नै ‘भानुभक्तको सम्झनामा’ शीर्षकको छन्दोबद्ध कविता लेखेर साहित्यको महासागरमा पौडी खेल्न थालेका हुन् । ‘समीक्षा’ साप्ताहिकमा २०४४ सालमा ‘सूर्य उदाऊ अब’ शीर्षकको कविता पहिलो पटक प्रकाशित रचना हो । जनसरोकारका विषयवस्तु उठान गरी हृदय कल्पाउने क्षमता राख्ने स्रष्टा पोखरेलको कलम विशेष गरी नेपाली समाज र राजनीतिप्रति केन्द्रित छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रि«य परिवेश, इतिहास, कला, साहित्यतर्फ समेत मुखरित भएको पाइन्छ । वेदना, ज्योति, प्रलेस, विजय, शब्दविम्ब जस्ता साहित्यिक पत्रपत्रिका निरन्तररूपमा सम्पादन कार्य गर्दै आएका कवि पोखरेल समाज परिवर्तनका लागि अधिकतम भूमिका निर्वाह गर्न रुचाउँछन् । उनले मूल्य सहितको जीवन बाँच्ने जीवनदृष्टि बोकेका छन् भने मानवीय सभ्यताको क्रममा विकास भएको विशिष्ट र सुन्दर अभिव्यक्तिलाई साहित्य ठान्दछन् । उन्नत विचार र कलालाई संयोजन गर्ने गरी रचना रच्ने मान्यताले ओतप्रोत भएका पोखरेल थिचिएका र शोषित वर्गलाई प्रेम गर्ने र समाजमा अग्रगति चाहने विचार सम्प्रेषण गरी साहित्यकारहरूले समाजलाई गुण लगाउनुपर्ने विचार सार्वजनिक गर्छन् । उनी शोषित र उत्पीडितहरूको पक्षमा, श्रमजीविहरूको पक्षमा, उदीयमान वर्गको पक्षमा, अग्रगामी सोच र विचारको पक्षमा लेखिने साहित्यलाई नै प्रगतिशील साहित्य ठान्दछन् । समाजमा व्याप्त रूढिवादी, विकृति-विसङ्गति, थिचोमिचो, शोषण-दमनको जरो पत्ता लगाई उखल्ने जमर्को स्वरूप उनको कलम चलेको हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । ‘सेतो दरबार छेउबाट’ (०५६), ‘यात्राको एउटा दृश्य’ (०६०), र ‘अनुहार’ (०६५) गरी अहिलेसम्म तीन ओटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशन भइसकेका कवि मातृका (१) समाजवादी, यथार्थवादी धाराका पृष्ठपोषक, (२) वर्गीय चेतनाले ओतप्रोत, (३) माक्र्सवादी दर्शन अङ्गिकार, (४) जनयुद्धप्रति अनुरागी भावना (५) मानतावादी दृष्टिकोण, (६) समाज रूपान्तरणमा जोड, (७) क्रान्तियोद्धाहरू निस्वार्थी हुनुपर्ने विचार प्रकट, (१०) सहादत प्राप्त मुक्तिमार्गका हिमायतीहरूप्रति श्रद्धा र आस्था, (११) यथास्थितिवादी र पश्चगमनवादीहरूको विरोध, (१२) राज्यआतङ्कको भत्र्सना, (१३) अग्रगमनको दिशामा लम्केको राष्ट्रनिर्माणमा जोड, (१४) जीवनवादी एवं आशावादी विचार प्रेषण, (१५) निमुखाहरूको आवाज बुलन्द, (१६) राष्ट्रिय अखण्डता, एकता र मेलमिलापका पक्षधर, (१७) सकारात्मक परिवर्तनको पक्षमा वकालत, (१८) सरल, सहज, मिठासपूर्ण भाषाशैली र समाजमा पचेका बिम्व, अलङ्कार एवं प्रतीकहरूको प्रयोगजस्ता प्रवृत्तिहरू लिएर देखा परेका छन् ।
क्रान्तिकारीको आवरणमा ब्रह्मलुट गर्ने अवसरवादीहरूको कुकृत्यको भण्डाफोर नगरी मुलुक उँभो लाग्दैन । कागजी र मुखौले कानुनी योजना राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निर्वलियो बनाएर सात पुस्तालाई पुग्ने धन बटुल्न माहिर नेतानेतृहरूलाई चुलाचौका बार्नुपर्छ । मान्छे किनेर स्वार्थको घैला भर्नेहरूबाट बेलैमा सतर्क रहनुपर्छ । नत्र रातो किताब लिएकाहरूबाटै जनता र मुलुक खतरामा पर्नुपर्छ भन्ने भाव सञ्चार गर्दै कवि मातृका कविताबाटै खबरदारी गर्छन्-
बस्तीहरूलाई आतङ्कित बनाउँदै
नबुझिने, नबुझिने कुरा गर्छ । (‘यात्राको एउटा दृश्य’, पृष्ठ ः १७)
कथा विधाका हकमा भने उनका ‘सन्त्रस्त आँखाहरू’ (०६१) र ‘घाम झुिल्कनु अघि’ (०६७) गरी दुई कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन् । उनी (क) माक्र्सवादी सिद्धान्तबाट प्रभावित वर्गीय दृष्टिकोण, (ख) नयाँ र पुराना पुस्ताका बीच देखिएका द्वन्द्वात्मक अवस्था अभिव्यक्त, (ग) विसङ्गति एवम् निःसारतापूर्ण परिस्थितिप्रति तीव्र आक्रोस, (घ) अमूर्त विषयवस्तुलाई सूत्रात्मक एवम् साङ्केतिकरूपमा प्रयोग, (ङ) निरीह, विवश तथा यन्त्रवत् आधुनिक मान्छेको चित्रणमा रूचि, (च) समतामूलक समाजनिर्माणको आग्रह, (छ) प्रगतिशील चेतनाको तीव्रता, (ज) स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष र विद्रोहका पक्षमा अभिमत प्रकट, (झ) वर्ग र पात्रानुरूप भाषा र शैली प्रयोगमा सजगता, (ञ) आर्थिक विषमताबाट सिर्जित पीडाहरूको प्रस्तुतिमा रूचिजस्ता कथागत विशेषताका साथ कथा लेखनमा सक्रिय छन् ।
(१०) पार्वती राउत (२०२६)- मातापिता कृष्णादेवी र डम्बरबहादुर राउतकी आठौँ सन्तानको रूपमा २०२६ भदौ ८ गते भलायडाँडा-१, सरुने, उदयपुरमा पहिलो पटक आँखा खोली हाल पति अधिवक्ता रमेश थापासँग जीवनसंगिनीका रूपमा जीवन विताइरहेकी कवयित्री पार्वती राउत (२०२६) नेपाली साहित्याकासमा ‘भनसुनको देस’ कविता सङ्ग्रह (०६७) लिएर देखा परेकी छिन् । उनी समाजमा देखिएका विङ्गत पाटाबाट विरक्त हुन्छिन् र कवितामार्फत नै क्रान्तिको मसाल सल्काउँछिन् । राष्ट्रियता गुम्दै गएकोमा खेद प्रकट गर्दै नशानशामा रगत उम्लनेजस्तो जोसिलो कथन अघि सार्छिन् ।
कवितामा यसो भनिए पनि आवश्यक परेमा रगत समेत बगाउँदै प्रजातन्त्र जोगाउन क्रान्ति मैदानमा उत्रनुपर्छ भन्ने विचार राख्न भने उनी चुकेकी छैनन् । गरिवलाई जोतेर सामन्तहरू बाँचेका छन् भन्ने कथन अघि सार्दै न्याय दिलाउन बुद्धलाई आमन्त्रण गर्छिन् । प्रौढ विचार सम्प्रेषणमा कमी देखिए पनि सामन्त निर्मूलमा युवाशक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा विश्वास राख्छिन् । चुनावताका गुलिया कुरा गरेर सदनमा पुगी स्वार्थमा लिप्त हुने कथित नेताहरूको गालामा थपपड बर्साउन समेत उनी चुकेकी छैनन् । प्रकृतिको विधानले नै विवा तुल्याउन सक्छ । विधुवा नारीको पीडालाई समेत उनले काव्यात्मक रूप दिने जमर्को गरेकी छिन् । उनले शान्ति डाक्न भनेर धेरै शब्द खर्च गरेकी छिन् । कसैसँग लाज छोप्ने वस्त्र छैन, कसैसँग भने पर्याप्त छ । यस खाले असमानताका कुरा यत्रतत्र आएका छन् र दीनदुःखीहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गरिएको छ । नारी हकअधिकारका लागि एक जुट हुन आह्वान गरेकी छिन् । संस्कृतिलाई विकृत तुल्याउनुहुन्न भनेर पवित्र सांस्कृतिक पक्षसँग उनी सरोकार राख्न रुचाउँछिन् । शिक्षकले पढाउने तर विद्यार्थीले नपढी दिने जस्ता जीवनका तीता अनुभव समेत कवितामा आएका छन् । घरकालाई बास र मायालु हात चाहिएको र वन पसेकालाई घर फर्काउन मोहनी मन्त्र चाहिएको कुरा गर्न पनि उनी पछि परेकी छैनन् । पारिवारिक प्रसङ्ग, चुलोचौकाको पिरलो, लैङ्गिक थिचोमिचोको वेदनाजस्ता पक्षहरूले समेत काव्यात्मक रूप पाएका छन् उनका कवितामा । यस देसमा श्रमजीवि भए पनि शोषणले चरमोत्कर्षता प्राप्त गरेको छ । कानुन भए पनि डलरमा बिकेको छ । पर्याप्त डाक्टर, नर्स भए पनि गाउँ रोगी छ । किसानले हलो जुटाउन सके पनि फाली जुटाउन सकेका छैनन् । सदाचारको मन्त्र पाठ भए पनि भ्रष्टचार मौलाएको छ । नेतानेतृहरूको सङ्ख्याले आकास छोए पनि गुणात्मकताको कसीमा घोटेर हेर्दा प्याज नखाने बाहुन पाउनुझै दुर्लभ भएको छ । मूलतः देस विदेसी इसारा र इरादामा चलेको छ अर्थात् भनसुनमा नै चलेको छ । कवयित्री राउत यही निष्कर्षमा पुग्दै भन्छिन्-
भनसुनको देस हो यो, मनसुन आउँदैन
भ्रष्टचारको देस हो यो, सदाचार आउँदैन । (भनसुनको देस, पृ. २४)
त्यसो भए पनि जीवनका तीता अनुभव र राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समृद्धिका पक्षमा खरा र दरा भावना यत्रतत्र पाइन्छन् । शान्तिकामी बन्न आह्वान, प्रजातन्त्रको जग बलियो बनाउन वलिदानी दिन पनि पछि नपर्न आग्रह, विसङ्गति वोध, लैङ्गिक असमानता विरुद्ध वैचारिक आवाज, नेपाली स्वाभिमानको गाथागायन, शैक्षिक जगत्को विकृतिप्रति व्यङ्ग्य, मधेस आन्दोलनले उमार्न खोजेको चेतना प्रेषण, जनता जगाए मात्र नेपाल जाग्ने भावनाजस्ता प्रवृतिहरू लिएर कवयित्री राउत पाठकमाझ आएकी छिन् । उनको काव्यजगत्मा पदार्पणले उदयपुर र सप्तरी जिल्लामा विशेष महत्व राख्दछ ।
(११) पुन्य कार्की (०२७)- ‘बाघले घाँस खायो’ (०५४), ‘असल बन्छु’ (०६३) र ‘आस्थाको अग्निपथ’ (०६५) गरी तीन कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरिसकेका कवि पुन्य कार्की (०२७) (१) समाजवादी, यथार्थवादी धारामा कलम चलाउनु, (२) वर्गीय चेतनाले ओतप्रोत भई माक्र्सवादी दर्शन अंगिकार गर्नु, (३) पिछडिएका वर्गको मुक्तिमार्ग पहिल्याउनु, (४) जनयुद्धका क्रममा देखे, भोगेका कुराहरूलाई रिठ्ठो नविराई प्रस्तुत गर्नु, (५) वर्तमानको जग बलियो पारेर भविष्य सपार्न खोज्नु, (६) साहित्य, कलाबाट पनि समाज रूपान्तरण गरी नवीन अध्याय थप्न सकिने विचार राख्नु, (७) जनयुद्धको सजीव चित्र उतार्नु, (८) राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आफ्नो आदर्शपुञ्ज ठान्नु, (९) कमरेडहरू सुविधाभोगी नभई निस्वार्थी मनले जनसेवामा समर्पित हुनुपर्ने आवाज उठाउनु, (१०) लोक कल्याणमा शहादत हुनेहरूप्रति श्रद्धा र आस्था खन्याउनु, (११) यथास्थितिवादी र पश्चगमनवादीहरूको झाँको झारी अग्रगमनको दिशामा लाग्न उक्साउनु, (१२) राज्यआतङ्कको खुलेर भत्र्सना गर्नु, (१३) राष्ट्रप्रेमी र राष्ट्रसुधारको स्वर गुञ्जाउनु, (१४) श्रमजीविहरूको विजय निश्चित रहेको आशावादी विचार प्रेषण गर्नु, (१५) निम्न वर्गको आवाज बुलन्द पार्नु, (१६) नेपालीहरू बीचको अखण्ड राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको प्रशंसा गर्नु, (१७) आमूल परिवर्तनको पक्षमा उभिएर चेतना छर्नुजस्ता काव्यगत प्रवृति लिएर देखापरेका छन् ।
कथा फाँटमा भने उनका गरी ‘मखमली’ (०५७), ‘मध्यरातमा’ (०६२) र ‘बलभन्दा बुद्धि ठूलो’ (०६३, बाललोककथा सङ्ग्रह) गरी तीन कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन् । उनी जनयुद्धकामीहरूप्रति श्रद्धाभाव प्रदर्शन गर्ने कथाकार हुन् । जनयुद्धको क्रममा पति मारिएकी एक विधुवाको स्वलापलाई कथ्यवस्तु बनाएर जन्मेको ‘स्वलाप’ कथामा उनका छोराहरू क्रान्तिको मैदानबाट उनलाई चिठीमा लेख्छन्—क्रान्तिको महाअभियानमा पस्नु, यस्तो विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुनु मेरो अहो भाग्य हो । यहाँ जो पनि आजीवन विद्यार्थी नै रहिरहने रहेछ । सिकेर सिकी नसकिने अथाह कुराहरू रहेछन् यहाँ । जानेर जानी नसकिने अनन्त कुरा रहेछन् यहाँ । यहाँ यस्तो पनि देखियो आमा ! युगौँयुगदेखि उत्पीडनमा परेर लाटिएका जीब्राहरू छुराजस्तो धारिलो भएको पनि देखियो । सन्दुक खोल्न नजान्ने हातहरू बन्दुक चलाउन जान्ने भएको पनि देखियो । टोपीमा, तन्नामा दिनभरि कार्चोपी बुट्टा भर्ने बहिनीहरू कम्मरभरि कार्तुसको माला भिरेर युद्धको गीत गाउँदै रनबन चाहरेको पनि देखियो । कपुरी ‘क’ नजान्ने हातहरू -हामी निरङ्कुशताका कैदी हैनौँ स्वतन्त्रता, समानता र न्यायका सेनानी हौँ भनेर भित्ता भित्तामा गर्जना कोर्ने भएको पनि देखियो । यस विश्वविद्यालयको प्राङ्गनमा त यस्तो लाग्छ— हावाको सुसाइभित्र जुलुसको तुमुल ध्वनि मिसिएर आएजस्तो, गृहिणीले घुमाएको जाँतोमा जनता खाने घुन कीराहरू मकैकोदोसँगै पिसिएर आएजस्तो, चराहरूको चिरविराहटभित्र नयाँ दिनको स्वागत गान भेटिन्छ यहाँ । नदीहरूको कुलकुलाहटभित्र धर्तीकै उमङ्ग छचल्किएको आभाष मिल्दछ यहाँ । यहाँ हरेक चीज नौलो छ, नयाँ छ । युद्ध भन्ने कुरा सिकेर जान्ने कुरा होइन रहेछ । हामी व्यवहारबाट धेरै कुराहरू सिक्दै जाँदै छौँ । (‘मध्यरातमा’ कथा सङ्ग्रह (२०६२) मा सङ्ग्रहीत ‘स्वलाप’ कथाबाट)
पुन्य कार्कीका कथाका वारेमा साहित्यकार रामप्रसाद ज्ञवालीको कलम बोलेको छ- बहुसङ्ख्यक शोषितपीडितप्रतिको गम्भीर चासो, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको गम्भीर संवेदनशीलता, समाजप्रतिको दायित्व बोध र प्रगतिशील राजनैतिक सचेतना कथाकार कार्कीका प्रमुख विशेषता हुन् । उनका कथाहरूले सामन्तीसंस्कार, दासमनोवृत्ति र सामाजिक शोषणले लाटो पारिएका मनहरूमा विद्रोह सञ्चार गर्छन्, अज्ञानता र अशिक्षाले सुषुप्त मनहरूमा जागृति भर्छन् र मानवद्वोषीहरूद्वारा गरिएको असह्य अत्याचारले पलायन भएका मनहरूमा आँट र उत्साह छर्छन् । उनी (क) जनयुद्धको विषयवस्तुमा केन्द्रीत, (ख) युगिन यथार्थको प्रतिबिम्वन, (ग) अग्रगामी पात्रमा आधारित, (घ) विकृत राजनैतिक खेलप्रति घोर वितृष्णा, (ङ) पात्रहरूको वाह्य र आन्तरिक दुबै जगत्को चित्रणमा खप्पिस, (च) आञ्चलिकता र स्थानीयताको प्रभाव ग्रहण, (छ) ग्रामीण निम्न र मध्यम परिवारको चित्रण, (ज) अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्पराप्रति विद्रोही भावना, (झ) विसङ्गति र विकृतिमूलक परिवेशप्रति व्यङ्ग्य, (ञ) बालमनोविज्ञान र मनोविज्ञानमा आधारित अभिव्यक्तितर्फ रूचिजस्ता कथागत विशेषताका साथ कथा लेखनमा सक्रिय छन् । ‘कविको छैटौँ इन्द्रिय’ निबन्ध कृति प्काशन गरिसकेका कार्कीको अर्को निबन्ध सङ्ग्रह साझा प्रकाशनबाट प्रकाशन हुन गइरहेको छ ।
(१२) कौशल चेमजोङ (०२८)- उनको ‘भूत’ (०५६) लघुकथा सङ्ग्रह प्रकाशित छ । उनी (क) गरिबीको चित्रणमा रूचि, (ख) मानवताको पक्षमा वकालत, (ग) सामाजिक एकता र भाइचाराको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड, (घ) सामाजिक वेमेललाई मेलमा परिणत गर्ने चाह व्यक्त, (ङ) नैतिकता र आदर्शताको स्थापनामा जोड, (च) ग्रामीण जनजीवनभोगाइलाई दुरुस्त उतार्नु, (छ) सांस्कृतिक सम्पत्तिको सुरक्षामा केन्द्रीत हुन आह्वान् (ज) श्रमप्रति श्रद्धाभाव जगाउनुपर्ने भावना अभिव्यक्त, (झ) सामाजिक यथार्थलाई अङ्गिकार गर्दै कथा लेखनमा सक्रिय, (ञ) सिकारूपनका प्रशस्त अवस्थाजस्ता कथागत विशेषताका साथ कथा लेखनमा सक्रिय छन् ।
(१३) कपिल ठकुरी (०२९)- उनको ‘एउटी बेस्या र म’ (०६१) कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छ । विशेषतः उनी (क) यौन मनोविश्लेषणमा रूचि, (ख) जनयुद्धकालका विषयवस्तुको उठान गरी गृहयुद्धको समाप्तिको चाह व्यक्त, (ग) रूढिग्रस्त परम्पराप्रति विमति प्रकट, (घ) मनोवैज्ञानिक यथार्थको चित्रणमा अग्रसर, (ङ) निम्न वर्गप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गरी कारुणिक चित्रणमा सफल, (च) पात्रानुरूप उचित संवादको संयोजन, (छ) नारीवर्गको विवशताको चित्रण, (ज) हडबडमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने मानवीय प्रवृतिको भण्डाफोर, (झ) ग्रामीण र सहरीया दुवै परिवेशको प्रयोगमा रूचि देखाउनु, (ञ) आलोकाँचो भाषा र अपरिपक्व भाषाशैली प्रयोगजस्ता कथागत विशेषताका साथ कथा लेखनमा सक्रिय छन् ।
(१४) नन्दलाल आचार्य (०३०)- उनको ‘युग उचाल्ने अक्षरकर्मीको अवसान’ (०६७) प्रकाशित नाट्यकृति हो । ‘टुक्के दिदी र उखाने दाइ’ (बालएकाङ्की सङ्ग्रह) समेत प्रेसमा रहेको देखिन्छ । नाटक/एकाङ्कीकार नन्दलाल आचार्यका नाट्यगत विशेषताका वारेमा समीक्षक रामविक्रम थापाको कलम बोलेको छ- ‘२०६३-२०६६ मा सिर्जित र २०६४-२०६७ मा शब्दाङ्कुर, दायित्व, मधुपर्क, गरिमा, मिर्मिरे र कलममा प्रकाशित ९ ओटा र अप्रकाशित ६ ओटागरी कूल १५ ओटा नाटक/एकाङ्की सङ्गृहीत सद्य प्रकाशित ‘युग उचाल्ने अक्षरकर्मीको अवसान’ आचार्यको प्रथम पुस्तकाकार कृति हो र नेपाली साहित्यको नाटक विधामा उनको सार्थक र सशक्त उपस्थिति पनि हो । प्रथम पाइला नै ऊध्र्वगामी भएकाले नाटक विधामा यिनलाई उदीयमान प्रतिभा नभनी सुखै छैन । पहिलो ‘वादविवाद’ एकाङ्कीमा भौतिकवादी पति र अध्यात्मवादी पत्नीबीचको तर्क-वितर्क, दोस्रो ‘करार-विवाह’ मा पाँचवर्षे म्यादको अस्थायी विवाह, तेस्रो ‘दर्द’ मा उपेक्षित र परित्यागित महिलाको मार्मिक पीडा, चौथो ‘आधा मेरो आधा तिम्रो’ मा सन्तानले आमा र बाबु दुवैबाट संयुक्त थर लिने समानताको वकालत छ भने पाँचौँ ‘जस्तो मति उस्तै गति’ मा पति र पत्नीबीचको धन र आर्जनको अहम् छ । पुस्तककै नाम बोकेको उल्लेख्य र प्रतिनिधि छैटौँ नाटक हो- ‘युग उचाल्ने अक्षरकर्मीको अवसान’ । प्रगतिवादी कवि एवम् निर्भीक पत्रकार कृष्णसेन ‘इच्छुक’लाई पुलिस प्रशासनले बर्बर यातनाकासाथ सहिद बनाएको हृदयविदारक शब्दचित्र यहाँ छ । तीनओटा दृश्यमा विभक्त यो ऐतिहासिक नाटक कलम र बन्दुकबीचको कारुणिक युद्ध हो र सेनहत्याकाण्डलाई पर्दाफास गर्ने जनयुद्धकालीन जीवन्त दस्तावेज पनि हो । सातौँ एकाङ्की ‘पीडा एक भाका अनेक’ मा गणतान्त्रिक आजको नेपालमा पनि जनअपेक्षामा तुसारापात भएको कुरा, आठौँ ‘एकता’ मा हिमाल, पहाड र तराईको एकता र समझदारीमा जोड, नवौँ ‘नम्र- विनम्र’ मा प्रेम र विवाहको समस्याको सन्तुलित समाधान, दशौँ नाटक ‘नाम तिम्रो काम हाम्रो’ मा बोर्डिङ स्कुलको भ्रष्टाचार र विकृति-विसङ्गति छ भने एघारौँ ‘परिवर्तन’ मा परिवर्तनको नाममा गाउँमा मानवीय संवेदना हराएको धरासायी सन्दर्भ छ । यसैगरी बाह्रौँ एकाङ्की ‘छलछाम छात्ते छ पार्टी’ प्रतिगामी तत्वहरूको चलखेल देखाउने हास्यव्यङ्ग्यात्मक नाटक हो भने तेह्रौँ ‘दाइजो’ मा दाइजोपीडित अभिभावकको टीठलाग्दो (भयावह) मनोदशा छ । चौधौँ नाटक ‘देश हराएको सूचना’ मा सीमा मिचिएको, देश टुक्रिने सम्भावित खतरा र संविधान-सभाको चुनाव पटकपटक सरेको पीडा छ । पन्ध्रौँ र अन्तिम नाटक ‘परिचय’ का १७ जना पात्रहरूले सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गरेका छन् । हरेक नाटकका पात्रहरूले आफ्नो अस्तित्व खोजेका छन् ,परिचय खोजेका छन्, हक र अधिकार खोजेका छन् । नाटककारले समतामूलक र अग्रगामी समाज खोजेका छन् । पत्रपत्रिका र पुस्तकहरूबाट समसामयिक र जल्दाबल्दा कुराहरूको जानकारी लिएर नाटक/एकाङ्कीको निर्माण भएकाले नाटककार नन्दलाल आचार्यको अध्ययन, चिन्तन र मन्थनको क्षेत्र व्यापक र उज्यालो छ । उखान, तुक्का र गहकिला उक्ति र सूक्तिसहितको कवितात्मक भाषाले सम्वाद जीवन्त भएर नाटक गाढा र प्रभावकारी भएका छन् । अनुसन्धान र अनुभवको व्यापकताले नाटकहरू दार्शनिक, वौद्धिक र सार्थक भएका छन् । कुप्रथा, कुसंस्कार, विकृति, पीडा, विसङ्गति र असमानताका विरूद्धमा धावा बोल्ने यी नाट्यवाणीहरू विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्दै र कुराको जरो (चुरो) पक्रेर अभिव्यक्ति दिन सफल छन् । नन्दलालका नाटकमा बालमनोविज्ञान, द्वन्द्व, अन्तरद्वन्द्व, आक्रोश, ग्रामीण परिवेश, घृणा, पारिवारिक वातावरण आदिको बाहुल्यता पाइन्छ । निम्नवर्गीय र सीमान्तकृत पात्रहरूको उन्मुक्तिको निचोड छ । परिवर्तनको पक्षमा वकालत गर्ने आचार्यको धारणा नकारात्मक र पाखण्ड होइन, सकारात्मक र विवेकसम्मत परिवर्तनको पक्षमा सन्देश दिनु रहेको छ । प्रत्येक नाटकको अन्त्य सहज, सुखद र रमाइलो भएकाले यिनी संयोगान्त नाटककारका रूपमा उभिएका छन् । नाटक पढिसकेपछि पाठकको मनमा सानान्दको फूल फुलाउन सक्नु यिनको नाट्यशिल्पको चातुर्य हो ।’ (नयाँ कोशी, पू. ३७, मङ्सिर ०६८, पृष्ठ ४४)
त्यसै गरी साहित्यकार दिल साहनीले उनका नाटककार वारे भनेका छन्- आचार्यले मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा एकांकी/नाटक लेखेका छन् । उनका प्रत्येक नाटकमा नयाँ विचार, नयाँ भाषाशैली तथा नयाँ प्रयोग छ । उनको चिन्तनमा गहिराइ र अभिव्यक्तिमा ऊर्जा छ । उनका नाटक रोचक, विचारोत्तेजक, यथार्थपरक, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी, शिक्षामूलक, समस्यामूलक, समाधानमूलक र समाजलाई नयाँ चेतना दिने खालका छन् । उनका केही नाटक हास्यव्यङ्ग्यात्मक छन् भने केही नाटक गम्भीर र दार्शनिक पनि छन् । उनका केही नाटक सामाजिक छन् भने केही राजनीतिक पनि । उनका केही नाटक मनोवैज्ञानिक छन् भने केही ऐतिहासिक पनि । सामान्य विषयलाई गम्भीरता र रोचकताका साथमा प्रस्तुत गर्नु उनको विशेष खुबी हो । लेखकले यतिबेलाका नेपालका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक, राजनीतिक, जातीय वर्गीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय आदि सबै प्रकारका समस्यालाई आफ्ना नाटकका विषयवस्तु बनाएका छन् । उनले नाटकमा समस्याका साथै समाधान पनि दिएका छन् । उनका नाटक सार्थक र बौद्धिक छन् । अध्ययन र अनुभवको व्यापकता झल्किन्छ ।
त्यस्तै ‘नाटकमा विविधताको खोजी’ शीर्षकमा कृष्ण शाह यात्रीले आचार्यको नाट्य कृतिका वारेमा भनेका छन्- नेपाली नाटकमा पछिल्लो दशकमा देखिएको सक्रिय नाम हो- नन्दलाल आचार्य । उनले नाटकसँगै कविता, कथा र निबन्धमा पनि कलम चलाउँदै आइरहेका छन् । मोफसलमा रही निरन्तर साहित्यसाधना गरिरहेका आचार्यको पहिलो नाटकसङ्ग्रह हो- ‘युग उचाल्ने अक्षरकर्मीको अवसान’ । यसमा १५ वटा समसामयिक एकाङ्कीनाटकहरू सङ्ग्रहित छन् । नाटकहरूबाट थाहा लाग्छ, उनी वैचारिक नाटक लेख्न रुचाउँछन् । उनी आफूले देखेभोगेका यथार्थलाई नाटकमा ढाल्न सक्ने खुबी राख्दछन् ।
शीर्ष नाटक ‘युग उचाल्ने अक्षरकर्मीको अवसान’मा कवि कृष्ण सेन इच्छुकलाई द्वन्द्वकालमा राज्यले दिएको कठोर यातना र हत्याको कहालीलाग्दो दृश्यलाई दर्शाइएको छ । यस नाटकमा कवि इच्छुकका कविताहरू पनि नाटककारले सापटी लिएका छन् । तीन दृश्यमा विभाजित यस नाटकले धेरै वटा ऐतिहासिक तथ्यहरू बोकेको छ । नाटक ‘देश हराएको सूचना’मा संक्रमणकालको नेपालको दुर्दशालाई चित्रण गरिएको छ । देश क्रमशः खिइँदै र टुक्रिँदै जान थालेको चिन्ताले ग्रस्त सूत्रधारको वरिपरि नाटक घुम्छ । यी बाहेक सङ्ग्रहभित्र ‘पीडा एक ः भाका अनेक’ र ‘परिचय’ नाटकहरू पनि राजनीतिलाई मूल विषय बनाइएको छ । दुबै नाटकले सामाजिक र राजनीतिक बेथितिको मुद्दा उठाएको छ । ‘परिचय’मा भने नाटककारले पाठकलाई परम्पराहरूको जानकारी दिन खोज्दा विषय राम्रो हुँदाहुँदै पनि नाटकको प्रस्तुति फितलो बन्न पुगेको छ । यसमा नाटकीय तत्व कम छ ।
आचार्यले सामाजिक कुरीति र संस्कार विरुद्ध लेखिएका केही नाटकहरू पनि सङ्ग्रहमा समावेश छन् । ‘करार विवाह’, ‘आधा मेरो ः आधा तिम्रो’, ‘जस्तो मति उस्तै गति’, ‘नम्र निवेदन’, ‘दाइजो’ यस्तै खालका केही नाटक हुन् । यी नाटकहरूमा प्रेम, विवाह, अस्तित्व, ईष्र्या, अभिमान लगायतका समस्याहरूमा केन्द्रित छन् । उनका केही सामाजिक नाटकहरूमा हाँस्य र व्यङ्ग्यको प्रयोग भएको देखिन्छ भने चेतना अभिवृद्धि र सुधारका अपेक्षाहरू पनि भेटिन्छ ।
लेखकीयमा नेपाली विषयको शिक्षकको नाताले विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा विद्यार्थीहरूलाई नाटक गराउनका लागि कतिपय नाटकहरू लेखिएको कुरा उल्लेख छ । केही नाटकहरू नाटककार आफैंले प्रस्तुत गरेको पनि बुझिन्छ । यस सङ्ग्रहमा परेका अधिकांश नाटकहरू विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा पहिले नै प्रकाशित भइसकेका छन् । यसबाट नाटक विधामा आचार्यको राम्रै मोह देखिन्छ । नेपाली साहित्यमा नाटक विधामा प्रतिबद्धतापूर्वक लाग्ने लेखकहरूको कमी छ । अझै पनि अरू विधाको तुलनामा नाटकका पुस्तकहरू कमै छापिन्छन् । यस अर्थका उनको उपस्थिति आशालाग्दो मान्न सकिन्छ ।
नाटक श्रव्य र दृश्य विधा हो । नाटक प्रविधिसँग जोडिएको विषय पनि हो । नाटकमा सबै कुरा संवादले मात्र व्यक्त नगरी पात्रको हाऊभाऊ, घटनाक्रम र परिस्थितिबाट पनि उतारचढाव आउनुपर्छ । यसमा अलिक विचार पुर्याएको भए वेश हुन्थ्यो । समग्रमा यस सङ्ग्रहका नाटकहरूमा संवाद, भाषाशैली र विचार सुन्दर छ । विषय छनोटमा विविधता देखिन्छ । (मधुपर्क, पूर्णाङ्क ५२१, कात्तिक २०६९)
कालजयी सर्जक घनश्याम ढकालको संयोजकत्वमा निर्माण गरिएको ‘माक्र्सवादी साहित्य र जनयुद्धको सौन्दर्य’ नामक सौन्दर्यशास्त्र/समालोचना विधाको ग्रन्थमा खेम थपलिया उनका वारेमा लेख्छन्- नन्दलाल आचार्य समाजवादी-यथार्थवादी साहित्यिक धारामा कलम चलाउने सशक्त प्रतिभा हुन् । त्याग र बलिदानको उच्चत्तम कीर्तिमानीहरू मध्ये कवि कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को सहादत एक परिघटना हो । त्यही प्रतिनिधिमूलक परिघटनालाई आचार्यले नाटकीकरण गरेका छन् । शासक-प्रशाकहरूका हजारौं जोर-जुलुमहरूको निरन्तर बेवास्ता गर्दै यहाँ क्रान्तिकारीहरूको सही परिचय दिइएको छ । यहाँ क्रन्तिकारीहरू सतिसाल हुन्छन्, उनीहरू त स्पातले बनेका मान्छे हुन् भन्ने भाव व्यक्त गरिएको छ । यहाँ प्रस्तुत गरिएको विचारले राष्ट्रिय स्वाभिमानको शिखर चुमेको छ भने क्रान्तिकारी आशावादको भावलाई परिपाकमा पुर्याइएको छ । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादलाई दुत्कार्नसम्म दुत्कारिएको छ । बारम्बार असफल प्रयास दोहोर्याइरहने प्रतिक्रियावादीरूको मुखुण्डो उघारिएको यस नाटकमा सच्चा क्रान्तिकारीहरू मृत्युलाई सहर्ष स्वीकार्न तयार हुन्छन् तर जनताको गद्दार बन्न कदापि तयार हुँदैनन् भन्ने कुरालाई यहाँ मर्मस्पर्शी ढङ्गले व्यक्त भएको छ । त्यस्तै, प्रतिक्रियावादी वर्गभित्र पनि जनतालाई माया गर्नेहरू रहेका हुन्छन् अनि क्रान्तिकारी वर्गभित्र पनि प्रतिक्रियावादी चरित्र बोकेका मानिसहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत गरिएको छ । साथै, जनताको हत्या गरेर प्रमोसन हुने प्रतिक्रियावादी परम्परालाई पनि यहाँ नङ्ग्याइएको छ । आचार्यको यस नाटकले एक दशकको महान् जनयुद्ध र त्यसले उघारेको संसारको नवीन क्षितिजको उद्घाटन तथा मालेमावाद र प्रचण्डपथीय आलोकमा सहिदी संस्कृतिको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको तथ्यलाई विर्सन सकिँदैन । (पृ.८७५ र ८७६)
आचार्यको ‘टुक्के दिदी र उखाने दाइ’ (बालएकाङ्की सङ्ग्रह, प्रेसमा) मा भने बालअधिकार संरक्षणमा बालबालिका नै सचेत भए समाजका कुतत्वले घुँडा टेक्न वाध्य हुने कुरा जाहेर गर्ने ‘अभियान’, चाहिँदाभन्दा अचाहिँदा कुरामा लहसिएकाले संसार दुःखपूर्ण भएको देखाउने ‘विलासी विश्व’, संसारका हरेक कुराले हामीलाई चेतना दिने भएकाले गुरु नै गुरुका बीचमा हामी रहेको दार्शनिक चेत दिने ‘साना गुरुहरू’, वैज्ञानिक प्रविधि गलत छैनन् दुरूपयोग गर्ने हाम्रो मानसिकता नै गलत भएको देखाउने ‘मोवाइल-गाथा’, मुलुकको सर्वाङ्गीण हितका लागि एकजुट हुनुपर्ने विचार सम्प्रेषण गर्ने ‘राष्ट्रि«य एकता’, कर्मले संसार साघुँरो पारे पनि महान् कर्मबाट आफू अग्लिनुपर्नेमा निच भावनाका कारणले होचाको होचै भएको देखाउने ‘सानो संसार र होचा मान्छेहरू’, कर्मले मान्छे पुज्य हुने कुरा देखाउने ‘सीप’, मान्छेले अरूलाई समेत हँसाएर आनन्दपूर्वक बाँच्न सक्नुपर्छ भन्ने चेतना दिने ‘टुक्के दिदी’, रूढिग्रस्त विचारले दुःखपूर्ण एवं अराजक क्षण निम्त्याउने कुरा जाहेर गर्ने ‘ट्वाइलेट भूत’, परिश्रम गर्नेले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जाहेर गर्ने ‘उखाने दाइ’ गरी जम्मा दस बालएकाङ्कीहरू समाविष्ट छन् ।
उनको प्रकाशोन्मुख ‘गरिमा’ कथा सङ्ग्रहमा विशेषतः पत्रात्मक कथा समेटिएका छन् । ‘बाठा मच्छडहरू’ कथाबाट एक अंश- प्रिय मित्र भुनेश्वर, हप्ता दिन अघि गाविसमा गाउँसभा थियो । सबै डाकिए, मलाई कसैले वास्ता गरेन । दलितका कुरा आउँदा पनि निर्णय गर्ने आफैँ र पेट भर्ने पनि आफैँ गर्ने गरेको कुरा थाहा पाएँ । हाम्रो जातिको नाम बेचेर किन पैसा कु्म्ल्याउँछौ भनेको त मैले मुखभरिको जवाफ भेट्टाएँ । सबैले एक मतका साथ मलाई वाक्युद्धमा पराजित गरे तर म मानसिक युद्धबाट भने पराजित भएको छैन । कुरा सुन्न चाहान्छौ, भुनेश्वर ? तिमीले पनि सुन्नैपर्छ । सुन्न सक्यौ भने मात्र तिमी मेरो विचारसँग निकट हुनसक्छौ ।
त्यस वेला सबै मिलेर मलाई उल्लीबिल्ली पारे । सभ्य मेरो छिमेकी आनन्देले ठूलै स्वरमा भन्यो-“के बुझैछी रै लक्ष्मणमा, तोरा राजनीति के सिखेलकौ ? तोरा भाँतीभाँतिके गन्थन कक आखिरमे कि भेटतौ ? चुपचाप जी, जी कक रही न ।” (के ठान्छस् ए लक्ष्मणे, तँलाई राजनीति कसले सिकायो ? तँ नानाभाँतिका गन्थन गरेर आखिरमा के पाउँछस् । चुपचाप हजुर, हजुर भनेर बस् न ।)
अर्कातिर घनश्याम कुर्लियो-“अपन औकातसँ उपर उठैलासभ हरदम खसले अछि । तोँ किया आफतमे परैल चाहैछ ? दलित वस्तीमे खानेपानी’क व्यवस्था केलगेल अछि । बच्चासभके पढैल स्कूलोँके दरबज्जा खुल्ले छोडल अछि । आब कि ताकै छी, लक्ष्मणमा ?” (आफ्नो औकातभन्दा माथि उठ्नेहरू सधैँ लडेका छन् । तँ पनि किन भड्खारामा पर्न चाहन्छस् ? दलित वस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था गरिदिएकै छ । बच्चाहरूलाई पढ्न स्कूलको ढोका खुल्ला छाडेकै छ । अब के खोज्छस्, लक्ष्मणे ?)
पुराना विचारका धुथर बूढाले समेत नयाँ कुरा गरे-“रौ लक्ष्मणमा ! दलित विकासक लेल आएल बजेट जगहजगहमे लगाए देने अछि । तोहर परिवारक बरतनमेँ चाउर राखिदैल सरकारी बजेट अलग केनै नहि अछि ।” (अरे लक्ष्मणे ! दलित विकासका लागि आएको बजेट ठाउँठाउँमा लगाइदिएकै छ । तेरो परिवारको भाँडोमा चामल हालिदिन भनेर सरकारी बजेट छुट्याएको पनि त होइन ।
उनी (क) निम्न वर्गप्रति अनुराग र शोषक वर्गप्रति आक्रोस व्यक्त, (ख) प्रगतिशील चेतनाको तीव्रता, (ग) आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त, (घ) सही ढङ्गले सांस्कृतिक रूपान्तरणमा जोड, (ङ) पात्रहरूको मनोदशा र विवसताको चित्रण, (च) घटनाप्रधानभन्दा बढी चरित्रप्रधान कथा लेखनमा अग्रसर, (छ) पात्रानुकूल संवाद प्रयोगमा सजगता, (ज) आञ्चलिकता र स्थानीयताको प्रभाव ग्रहण, (झ) समाजको यथार्थ चित्रणमा अग्रसर, (ञ) पत्रात्मक शैली अङ्गिकारजस्ता कथागत विशेषताका साथ कथा लेखनमा सक्रिय छन् ।
(१५) कृष्ण शाह ‘यात्री’ (०३२)- कथाकार यात्रीका ‘सूक्ष्म शिखाहरू’ (०५६) र ‘आणविक अस्त्र’ (०६२) गरी दुई कथा सङ्ग्रह प्रकाशन भएका देखिन्छन् । उनका नौ ओटा बालकथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन् । ती हुन्- ‘सहरमा डमरु’, ‘भूतको बाँसुरी’, ‘मसिने मुसो र अरू कथाहरू’, ‘जादुको टोपी’, ‘तिखेको सिङ’, ‘गुन्टे गैँडा’, ‘साथी भूत’, ‘अनौठो पुतली’, र ‘चङ्खे र पङ्खे’ । विशेष गरी उनी (क) मानवीय र मानवेत्तर पात्रहरूको सफल संयोजन, (ख) झिनो आख्यानात्मक प्रस्तुति, (ग) समाजमा व्याप्त विकृति विसङ्गतिको सफल भण्डाफोर, (घ) मानवीय मूल्यह्रासमा चिन्तावोध, (ङ) लैङ्गिक विभेदप्रति रोष व्यक्त, (च) विश्ववन्धुत्वको भावनामा जोड, (छ) बिम्ब र प्रतीकको प्रयोगबाट अमूर्त विषयवस्तुलाई सूत्रात्मक एवम् साङ्केतिकरूपमा प्रयोग, (ज) वैज्ञानिक चिन्तनयुक्त कथा लेखनमा रूचि, (झ) जनयुद्धका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको चित्रणमा रूचि, (ञ) सरल, सुवोध भाषाशैलीमा कथात्मक अभिव्यक्ति दिन खप्पिसजस्ता कथागत विशेषताका साथ कथा लेखनमा सक्रिय छन् ।
नाट्य क्षेत्रमा भने उनका ‘समय अवसान’ (०६१), ‘मान्छे-मान्छेहरू’ (०६४), ‘फुच्चे रोबोट’ (०६५, बालनाटक सङ्ग्रह), हिङपाङको चाँैरी (०६५), ‘निर्वासित मनहरू’, ‘जलपरी’, ‘खैरे खस्यो खोलामा’, र ‘अतिरिक्त यात्रा’ गरी आठ ओटा नाट्यकृति प्रकाशन साथै ‘प्रतिनिधि नेपाली नाटक’ र ‘प्रतिनिधि नेपाली बालनाटक’ गरी दुई नाट्यकृति सम्पादन समेत गरेको देखिन्छ । उनी मञ्चनयोग्य र विविध विषयवस्तु समेटेर कौतुहलपूर्ण नाटक/एकाङ्की सिर्जनामा खप्पिस छन् । विज्ञानविषयक उनका नाटक उत्कृष्ट मानिन्छन् । अन्य नाटककारका सवालमा नाट्यकृतिको उपलव्धताको अभावमा साङ्गोपाङ्गो अध्ययन हुन बाँकी छ ।
(१६) इन्द्र थापा ‘मिलन’ (०३४)- मातापिता नरमाया र डाकबहादुरका सुपुत्रका रूपमा वि.सं. २०३४ साल चैत्र ३१ गते विहीबार जन्मेका इन्द्र थापा ‘मिलन’को ०६१ सालमा ‘इन्द्रेणी’ प्यारोडी कविता, कविता तथा गीत सङ्ग्रह निस्केको छ । सोरुङ्ग छविसे-४, उदयपुरका बासिन्दा इन्द्रको ‘इन्द्रेणी’मा ‘घरवाली-पसलवाली’, ‘ठोक् न मादल ठोक्’ लगायतका २१ वटा रचना सङ्ग्रहीत छन् । विशेषतः वर्तमानलाई व्यङ्ग्य गर्न पुराना सिर्जनाको जग खोजेको स्पष्ट झल्कन्छ । उनले राजनैतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, व्यक्तिगतजस्ता हरेक निकाय र क्षेत्रका कमजोरीप्रति कठोर व्यङ्ग्य गरेका छन्-
आए नेता नेपालमा हाम्रो शोषण गर्दै
दाउरे पेट टन्न भर्दै चिल्लो कार चढ्दै ।
(दाउरे पेट ‘आइ यो मेरी जिन्दगीमे’)
(१७) धनुष राई (०३८)- राईको ‘सेतो हस्ताक्षर’ (०५९) लघुकथा सङ्ग्रह प्रकाशन भएको पाइन्छ जसमा उनले समसामयिक विषयवस्तुलाई टपक्क दिपेर कथात्मकरूप दिने काम गरेका छन् ।
समाज अहिले निक्कै परिवर्तन भएको छ । सबैलाई महसुस गराएको छ । संस्कार नबसेकोले अराजकताबाहेक अर्को चिज उपभोग गर्न नपाएको तीव्र आक्रोस पोख्न नयाँ पुस्ताले कन्जुस्याइँ गरेको छैन । जनताले चेतना त भेट्टाए तर त्यसको उपयोग गरेर समाजलाई लाभान्वित पार्न भने तगाराहरू पन्छाउन हम्मेहम्मे परेको वास्तविकता खोल्न समेत नयाँ पुस्ताका कविहरू पछि परेका छैनन् ।
आगो लिएर तपाईं
गाउँमा असिना पर्यो
पारिलो घाम हामीबाट खोसियो
हामी टकटक कामिरहेछौँ
मिथकको सर्पजागेझैँ ।
प्रौढपुस्ताका अनुभवको जगमा उभिएर विवेकसहितको नवीन विचार सम्प्रेणमा समेत नयाँपुस्ता कम्मर कसेर लागेका देखिन्छन् ।
ओ सहिद बाबू !
बाबुले खोसेर च्यातेको थियो
उरन्ठेउलो छोराको प्रेमपत्र
लिकमा हिँडेको थियो छोरो
यता देसले त तिमीलाई नै खोसेको थियो
पत्रपत्र च्यातिएका थियौ
निस्सासिएर सुकेछ देस.....
गजलहरूमा भने विशेषतः प्रेम प्रणय र आक्रोसलाई मूल केन्द्रीय वस्तु बनाउन नयाँ पुस्ताका सर्जकहरूको काव्यात्मक कलम एकोहोरिएको पाइन्छ । आजको काव्यात्मक लेखनीमा कि प्रेमको सागर छ कि घृणाको पराकाष्ठा छ भन्दा अतिशयोक्ति गरेको नठहर्ला ।
आँसुको भेल न छेक्न सकेँ
दुखेको कथा न लेख्न सकेँ ।
नसालु त्यो तिम्रो हेराइ
मायारूपी खानी लाग्छ ।
कस्तो बगरसरह सुनसान देख्छु
मात्र पत्थर छ खै भगवान् देख्छु ।
आजका कविहरूले अग्रज साहित्यिक स्रष्टाप्रति श्रद्धाले शिर निहुर्याउँनु जरुरी छ । देशभक्तिको गीत गाउनु छ । प्रेम-प्रणयका माध्यमबाट समेत जीवनको रहस्य खोतल्न आवश्यक छ । भोकले दाबिएको पेट देख्दा र नाङ्गो आँङ भेट्दा असमानताको झाँको झार्न परेको छ । प्राकृतिक रमणीयताको श्रेष्ठ मुलुकका बासिन्दा भएका नाताले पनि प्रकृतिले मोहित पार्दा त्यसैको भजन गाउँनुछ । अन्याय अत्याचारले सीमा नाघेको र थिचोमिचोको लेखाजोखा नभएको भेट्टाउँदा खबरदारी गर्न विद्रोहको स्वर सुसेल्नुछ । काम गरिखानेका हातगोडा जन्जिरले बाँधेर दासत्वको पाठ पढाइएको बखतमा स्वतन्त्रता र स्वअस्तित्वको गाथा रच्नु आवश्यक छ । रचना/कृतिमा सरल भाषालाई सलल बग्न दिई सरलता भित्रैबाट मीठास पैदा गर्नुछ । जीवन र जगत्का बहुल यथार्थका पाटाहरूलाई जीवन्त रूपमा उतार्न सक्ने विषय, विम्ब र प्रतीकहरूको छनौट गर्नुछ । कविहरूले लयात्मक, गेयात्मक र माझिएको भाषाशैलीको प्रयोगबाट काव्यात्मक भाव व्यक्त गर्नु जरुरी छ । सरल, सम्प्रेष्य, ग्राह्य एवं प्राञ्जल भाषाशैलीले नै स्रष्टा पाठकको मनमन्दिरमा एक कुशल सर्जकको रूपमा वास गर्नसक्छ भन्ने बुझ्नुछ ।
पत्राचार - लिट्ल फ्लावर मा.वि., राजविराज-९, सप्तरी,
फोन न- ०३१५२००३८
सम्पर्क - ९८४२८२९२०६